ဒီမှာစတင်ပါ - ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုယနေ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအတွက်မပြင်ဆင်ထားပါ - YBOP
ဤနေရာတွင်စတင်ပါ။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည်ယနေ့ခေတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအတွက်သင့် ဦး နှောက်ကိုပြင်ဆင်မထားပါ
ဤဆောင်းပါးသည်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် တိုတောင်းသော ညစ်ညမ်းမှုနှင့်သင်၏ ဦး နှောက်နှင့်ပတ်သက်သောအဓိကအယူအဆများကိုအနှစ်ချုပ်။ နောက်ကွယ်မှသိပ္ပံပညာအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ လိုက်နာပါ အားလုံး လင့်ခ်များနှင့်ဤစာမျက်နှာကိုဖတ်ပါ။ တချို့ကလင့်များလေ့လာမှုများမှရသောအလှည့်အတွက် link ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုသွားပါ။ တစ်ဦးထက်ပို In-depth ကိုနားလည်မှုနှင့်နောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထားအဘို့ကိုတွေ့မြင် အဆိုပါသုတေသနစာမျက်နှာ။ တိကျတဲ့အကြောင်းအရာများအတွက်စူးစမ်း porn အမေးအဖြေများ.
ဒါကဟုခေါ်သည် Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုဝတ္ထုအိမ်ထောင်ဖက်မှဖွအလိုအလျောက်တုန့်ပြန်။ စိတ်ဝင်စားစရာယောက်ျား ပိုပြီးကောင်းတယ်လို့ဆိုလိုနေတယ်သုက်ပိုး ejaculate သူတို့ပိုမိုလျင်မြန်စွာလုပ် သူတို့တစ်တွေဝတ္ထု porn ကြယ်ရှုမြင်အခါ။ ခေါ်ဆောင်သွားအသစ်အဆန်းရန်ဤအစွမ်းထက်အလိုအလျောက်တုန့်ပြန်လမ်းကိုသငျသညျအဘယျသို့ဆင်းစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ချိတ်ဆက်တဲ့ရန် အင်တာနက်ညစ်ညမ်းပေါ်မှာ။
ကြောင်းဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်လိုပဲသင်တစ်ဦးရှိ စရိုက်ယန္တရား သင့်ဦးနှောက်ထဲမှာ fertilize ရန်သင့်အားတိုက်တွန်း နှစ်ခုရှုထောင်အမျိုးသမီး, အမျိုးသားများ (သို့မဟုတ်ဘာပဲ) သင့်ရဲ့ screen ပေါ်မှာ။ (မှတ်ချက်: အဆိုပါ Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှု အမျိုးသမီးလည်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ လေ့လာရေးအခွင့်အလမ်းပေးသောအခါ, မုဆိုးစုဆောင်းအမျိုးသမီးဖြစ်ကြကြောင်းပြသ မနည်းကရာ အထီးထက်။ )
Primitive ဆားကစ် သင့်ဦးနှောက်ထဲမှာစိတ်ခံစားမှု, drives တွေကို, Impulses သတင်းပို့နှင့်မသိစိတ်တစ်ပိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချအုပ်ချုပ်။ သူတို့ကဒါထိထိရောက်ရောက်ကြောင်းအီဗိုလူးရှင်းသူတို့၏အလုပ်အကိုင်များပြုပါ သူတို့ကိုအများကြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းမမြင်ရပါဘူး လူသားမြားသညျလူသားတို့ခဲ့ကြသည်မတိုင်မီကတည်းက။
ပိုများသော dopamine, ကျေးဇူးပြုပြီး
သငျသညျ, ကြွက်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, နို့တိုက်သတ္တဝါများသည်များအတွက် အလိုဆန္ဒနှင့်အလှုံ့ဆျောမှု လိင်မှုကိစ္စကိုလိုက်စားရန်အဓိကအားဖြင့်အာရုံကြောဓာတုဗေဒဌာနမှခေါ်သည် dopamine။ Dopamine သည် ဦး နှောက်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သောစနစ်ကိုမြှင့်တင်သည်။ ငါတို့တပ်မက်ခြင်းနှင့်အပျော်အပါးကိုတွေ့ကြုံရသည့်နေရာ၊
ရှေးခေတ် ဆုလာဘ် circuitry သင်သည်သင်၏ရှင်သန်မှုနောက်ထပ်နှင့်သင့်ဗီဇအပေါ်လွန်သွားပြီးသောအမှုအရာလုပ်ဖို့နှိုးဆော်ခြင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့ဆုလာဘ်စာရင်း၏ထိပ်မှာရှိပါတယ် အစာ, လိင်, ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု, နှင့်အသစ်အဆန်း။ ဤရွေ့ကားစွဲလမ်းဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်အဖြစ် '' သဘာဝကစစ်ကူ, 'ဟုခေါ်ကြသည်။
အဆိုပါ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်ပါတယ် dopamine ၏ သငျသညျလှုံ့ဆျော သင့်ရဲ့ဗီဇတာဝန်ထမ်းဆောင်ဘာလုပ်ရန်။ အဆိုပါ squirt အဆိုပါပိုကြီး, ပိုငျသညျအရာတစ်ခုခုချင်တယ်။ dopamine နှင့်သင်အဘယ်သူမျှမဖွင့်ပါကလျစ်လျူရှု။ ချောကလက်ကိတ်မုန့်နှင့်ရေခဲပြင် cream-ကြီးမားတဲ့ပေါက်ကွဲမှု။ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင် လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသည်သင်၏ဆုလာဘ်များ၌ရရှိနိုင်သောအကြီးမားဆုံးသောသဘာဝ dopamine ပေါက်ဖွားမှုကိုပေးသည်။ dopamine ၏အမည်ပြောင်များထဲမှတစ်ခုမှာ“စွဲလမ်း၏မော်လီကျူး"အားလုံးစွဲလမ်းအတွက်ဗဟိုအခန်းကဏ္ plays ဖြစ်သောကြောင့်" ။
dopamine ကိုအပျော်တမ်းမော်လီကျူးဟုမကြာခဏရည်ညွှန်းသော်လည်း၎င်းသည်၎င်းဖြစ်သည် နည်းပညာပိုင်းတိကျမှုမရ။ Dopamine အများစုအကြောင်း ရှာကြံနှင့်ရှာဖွေနေ ဆုလာဘ်, အများအတွက် တင်ကူးသိမြင်မှု, အ ချို့တဲ့။ Dopamine ကထောက်ပံ့ပေးသည် အကွောငျးရငျး နှင့်မောင်း လိုက်ရန် အလားအလာ ဆုလာဘ်သို့မဟုတ် ရေရှည်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်. အငြင်းပွားဖွယ်ပေမယ့် နှင့် ဝေးအခြေချရာမှနောက်ဆုံး“ ဆုလာဘ်” သို့မဟုတ်ကောင်းသောခံစားချက်များသည်အဓိကအားဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာသည် opioids (နှင့် cannabinoids) ။ ရိုးရိုးလေးဆိုရလျှင် - dopamine လိုသောသည် opioids like နှိပ်ထားပါသည်။
စိတ်ပညာရှင်အဖြစ် Susan Weinschenk ကရှင်းပြခဲ့သည်အဆိုပါ neurotransmitter dopamine ကလူအရသာကိုခံစားရစေပေမယ့်အစားတစ်ဦးရှာအပြုအမူကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ပါဘူး။ "Dopamine ကျွန်တော်တို့ကိုလိုခငျြမှဖြစ်ပေါ်စေသည်, အလိုဆန္ဒထွက်မရှာ, ရှာ" ဟုသူမကရေးသားခဲ့သည်။ ဒါဟာတဦးတည်းအပျြောအပါးခံစားဖြစ်ပေါ်စေသည်သော opioid စနစ်ဖြစ်သည်။ သို့သျောလညျး "ဟုအဆိုပါ dopamine စနစ်ထက်ပိုမိုအားကောင်းဖြစ်ပါသည် opioid စနစ်က"ဟုသူမကရှင်းပြသည်။ "ကျနော်တို့ကကျနော်တို့ကျေနပ်မှုရှိပါသလဲထက်ပိုရှာကြာလော့။ " စွဲလမ်းမှုအဖြစ်စဉ်းစားစေခြင်းငှါ ချို့တဲ့ amok ကို run ။
Dopamine အပွောငျးအလဲ အသစ်အဆန်းအဘို့။ တစ်ဦးကကားသစ်ရုံ-ဖြန့်ချိရုပ်ရှင်, နောက်ဆုံးပေါ် gadget က ... ငါတို့ရှိသမျှသည် dopamine ၏ hits လိုက်ရှာနေကြတယ်။ အရာအားလုံးနှင့်အတူအမျှ dopamine plummets အဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားကွာ်လည်းကြွေတတ် NEW ။
ဘယ်လိုဤတွင်င် Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုအလုပ်လုပ်တယ်: အဆိုပါကြွက်ရဲ့ဆုလာဘ် circuitry လက်ရှိအမျိုးသမီးမှလေးစားမှုနှင့်အတူလျော့နည်းခြင်းနှင့်လျော့နည်း dopamine squirting, ဒါပေမယ့်အသစ်တခုအမျိုးသမီးများအတွက်ကြီးမားသော dopamine မြင့်တက်ထုတ်လုပ်နေသည်။ ကြောင်းအကျွမ်းတဝင်အသံပါသလား?
မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, ကြွက်နှင့်လူသား ဒါမတူဘူး အခါ t ကိုကြွလာဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့ဏတုံ့ပြန်မှု။ ဥပမာအားဖြင့်, အခါ, သြစတြေးလျသုတေသီများ (ဂရပ်) သည်တူညီသောခေါ်ဆောင်သွားသောရုပ်ရှင်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြသခဲ့သည်။ စမ်းသပ်သူများ၏ပြစ်ဒဏ်များနှင့်ပုဂ္ဂလဒိive္ဌာန်ကျသောအစီရင်ခံစာများသည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုတိုးတက်လာခြင်းကိုဖော်ပြသည်။ The“တူညီတဲ့အဟောင်းတူညီတဲ့အဟောင်း"ပဲပျင်းလာတယ်။ Habituation သည် dopamine ကျဆင်းခြင်းကိုပြသသည်။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းဖြစ်ပါသည် အကျိုးကို circuitry ဖို့အထူးသဖြင့်ဖြားယောင်း ဘာလို့လဲဆိုတော့အသစ်အဆန်းကတစ်ချက်နှိပ်ရုံပဲ။ ၎င်းသည်“ အိမ်ထောင်ဖက်”၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောမြင်ကွင်း၊ ထူးဆန်းသောလိင်ဆိုင်ရာလုပ်ရပ်သို့မဟုတ်အသစ်တစ်ခုကိုဖြည့်နိုင်သည်။ Tab များဖွင့်ပြီးနာရီကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်သည်မုဆိုးစုဆောင်းသည့်ဘိုးဘေးများတစ်သက်တာတွင်ဆယ်မိနစ်တိုင်း၌အသစ်သောလိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုတွေ့ကြုံနိုင်သည်။ သုတေသနဖြစ်သည့်အကြောင်း ဆုလာဘ်များနှင့်အသစ်အဆန်း၏မျှော်လင့်စိတ်လှုပ်ရှားတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် limbic ဦးနှောက် rewire မှအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်များကိုချဲ့ထွင်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းသိပ္ပံပညာရှင်များတစ်ဦးကိုခေါ်ဆိုတာဘာလဲ supernormal လှုံ့ဆော်မှု။ ဤရွေ့ကားကျနော်တို့မဟုတ်မမှန်အဖြစ်အလွန့်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောရိပ်မိထားတဲ့သာမန်လှုံ့ဆော်မှု၏ပုံကြီးချဲ့ (ဖြစ်ကောင်းဒြပ်) ဗားရှင်း, ဖြစ်ကြောင်းကိုလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ကြသည်။
ဒါဟာနိုဘယ်ဆုရှင်ခဲ့သည် Nikolaas Tinbergen အဘယ်သူသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းဟူသောဝေါဟာရကိုစတင်ခဲ့သည် supernormal လှုံ့ဆော်မှု (သို့မဟုတ် supranormal) ။ ငှက်များ၊ လိပ်ပြာများနှင့်အခြားတိရိစ္ဆာန်များသည်ကြက်ဥနှင့်မိတ်ဖက်အတုများကိုသာ ပို၍ နှစ်သက်ကြသည်ကိုသူတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဥပမာ၊ ငှက်မများသည် Tinbergen ၏ဘ ၀ ထက်ပိုမိုကြီးမားသည့်ဘ ၀ တွင်ထိုင်ရန်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်၊ သူတို့၏အဖျော့ဥ၊
လူသားတွေဟာ, ငှက်လိုပဲဆုလာဘ် circuit ကို activation မှတဆင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု၏တန်ဖိုးလေ့လာပြီး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုဖြန့်ချိအဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ dopamine နှင့် opioids - မျိုးပွားခြင်းသည်သင်၏မျိုးဗီဇအတွက် Job One ဖြစ်သည်။
အင်တာနက် porn နှင့်အတူ, ဒါဟာအဆုံးမဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ပါဘူး သစ်ခြင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုလာဘ်စနစ်ကအသံမြည်မယ်။ တက်သည် Dopamine မီးလောင်မှု သည်အခြားစိတ်ခံစားမှုများနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများလွန်းလူအပေါင်းတို့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမကြာခဏအဓိက feature ရာ:
ခေါ်ဆောင်သွားစကားလုံးများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာလှည့်ပတ်ခဲ့ကြပြီ။ ဒီတော့ရှိပါတယ် ဝတ္ထုအိမ်ထောင်ဖက်ထံမှ neurochemical အလုအယက်။ ဒါပေမဲ့တခါ-a-လအသစ်အဆန်း Playboy အဖြစ်မကြာမီသင်စာမကျြနှာကိုဖွင့်အဖြစ်အငွေ့ပျံ။ မည်သူမဆိုခေါ်ဆိုခလို Playboy သို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်များဖြစ်သော“ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်” သို့မဟုတ်“ စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်စေသောဗီဒီယိုများ” လော။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးစာတတ်တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့အသက် ၁၂ နှစ်ကျော်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်မလား။ ဂူဂဲလ်ညစ်ညမ်း prowl ၏ "ရှာဖွေခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်း" နှင့်မနှိုင်းယှဉ်ပါ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုထူးခြားစေသည့်အရာမှာသင်၏ dopamine ကိုမောက်စ်တစ်ချက် နှိပ်၍ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အသာပုတ်နိုင်သည်။
ဤအတူညီစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များ (စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, အရှက်ကွဲခြင်း, ထိတ်လန့်, အံ့သြစရာ) မသာ၏အတော်များများက dopamine ခြီးမွှောသို့သော်တစ်ခုချင်းစီသည်စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းများနှင့် neurotransmitter များကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည် (norepinephrine, epinephrine, cortisol) ။ ဤရွေ့ကားစိတ်ဖိစီးမှုအာရုံကြောဓာတု စိတ်လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့် စဉ်တွင် ချဲ့ dopamine ရဲ့ ပြီးသားအစွမ်းထက်ဆိုးကျိုးများ။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတစ်ဦးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူရဲ့ဦးနှောက်၏ခံစားချက်များကိုမှားယွင်းနိုင်ပါတယ် စိုးရိမ်ခြင်း သို့မဟုတ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည် လိင်စိတ်နိုးထ၏ခံစားချက်များကို။ ဒါဟာအချို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အစဉ်အဆက်ကိုပိုမိုထိတ်လန်သို့တင်းမာမှုများလျော့ပါးစေရန်သို့မဟုတ်ရှင်းပြကူညီပေးသည် စိုးရိမ်စိတ်သွန်းလောင်းပေး porn - သူတို့့အပို neurochemical jolt လိုအပ်ပါတယ်အဖြစ် လိင်နှိုးဆွဖြစ်လာဖို့, ဒါမှမဟုတ်အော်ဂဇင်ရန်။
ယနေ့ porn ကိုကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူသည်၊ ၂၄/၇ ရရှိနိုင်သည်၊ အခမဲ့နှင့်သီးသန့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာ န့်အသတ်အသစ်အဆန်းရရှိ။ ၎င်းကိုအသုံးပြုသည့်နည်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်သည် dopamine မွငျ့မား ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲရှည်လျားသောကာလများအတွက်, အင်တာနက် porn ကိုထူးခြားဆွဲဆောင်မှုနှင့်အလားအလာစွဲလမ်းအောင်။ ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုရှိနေသည်ဟုသဘောတူသူများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွဲစွဲစေသောမူးယစ်ဆေးဝါးများသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လေ့ရှိသည်။ အမူအကျင့်နှင့်စွဲလမ်းမှုသည်အချို့သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများကိုဝေငှသော်လည်း၊ ထိုကဲ့သို့သောနှိုင်းယှဉ်ချက်များသည်အခန်းထဲရှိဆင်ကိုကိုင်တွယ်ရန်ပျက်ကွက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ဆိုင်ရာ ဦး နှောက်ဆားကစ်များကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးထိုတိုက်နယ်များသည် မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအထူးသဖြင့်အားနည်းချက် (နှင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးကျနော်တို့အသက်ရှင်သည်အတိုင်းအဘို့အအတန်ငယ်အားနည်းချက်) ။
နောက်တစ်နည်းပြောရရင်အရက်၊ ကိုကင်း (သို့) လူကိုယ်တိုင်သေနတ်သမားအတွက်သဘာဝပတ်လမ်းမရှိဘူး။ အားလုံးသည်ဆုပေးစင်တာ dopamine (စွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများအတွက်လိုအပ်ချက်) ကိုမြှင့်တင်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုပုံစံကိုပုံဖော်နိုင်စွမ်းမရှိပါ။ အထူးသဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင် ဦး နှောက်အလွန်ပျော့ပျောင်းသော၊ ယင်း၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းကိုအားလုံးလေ့လာသင်ယူရန် programed (ကိုအောင်မြင်စွာမျိုးပွားနိုင်ရန်အတွက်) ။
အော်ဂဇင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်အားအရှိဆုံးသဘာဝအားဖြည့်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးရိုးဗီဇ၏ထိပ်တန်းအလုပ်ကိုပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ဤအစွမ်းထက်သောအတွေ့အကြုံနှင့်ဆက်စပ်သောအရာအားလုံးကိုမှတ်မိရန်ကြိုးစားသည်။ အသင်းအဖွဲ့များကို Big Event (အထွတ်အထိပ်) နှင့်ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့်၎င်းကိုပြုလုပ်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းတွင် voyeurism၊ ရှာဖွေခြင်း / ရှာဖွေခြင်းနှင့်အဆုံးမဲ့အသစ်အဆန်းတို့ပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင် fetishes၊ porn ကြယ်မျိုးစုံ၊ tab အမျိုးမျိုး၊ ထူးဆန်းသောလုပ်ရပ်များ၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ အံ့အားသင့်စရာ၊ စိုးရိမ်ခြင်းစသည်တို့ပါဝင်သည်။
(မှတ်ချက်။ ။ လူငယ်များအပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု , စိတျကူးနဲ့မသိမမြင်နိုင်သောတိုင်းအမျိုးအစားအမာခံ porn မှမြင့်တက်၏ အလွန်အမင်းနှိုးဆော်ခြင်းစဉ် ငါတို့ဘိုးဘေးများမလုပ်နိုင်သောအရာ။
လေ့လာရေးကဗီဒီယိုညစ်ညမ်းဝေးကြောင်းထုတ်ဖေါ် ငြိမ် porn ထက်ပို arousal.
အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးများအတွက်စားသုံးရန်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ သို့သော်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသုံးစွဲမှုအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ။ ဦး နှောက်၏သဘာဝကျသည့်အခြေအနေကိုယန္တရားများကမဖွင့်နိုင်ပါ။ အဲဒီအချိန်မှာတောင်မှအသုံးပြုသူကစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုနှိပ်ပြီးပြန်နှိုးဆော်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ အသက်အရွယ်အသုံးပြုသူများကိုစတင်ပါ erotica ကိစ္စရပ်များစောင့်ကြည့်။ တစ်ဦးက ဆယ်ကျော်သက်ရဲ့ ဦး နှောက် ၎င်းသည် dopamine ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သည် စွဲဖို့အလွန်အမင်းအားနည်းချက် နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်။ မြီးကောင်ပေါက်တိရိစ္ဆာန်များထုတ်လုပ် DeltaFosB ၏အဆင့်မြင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်သဘာဆုလာဘ်တုံ့ပြန်ပါတယ်။
လိင်စိတ်နိုးထနှင့်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးကိုသက်ဝင် တူညီတဲ့ဆုလာဘ် circuit ကိုအာရုံကြောဆဲလ်တွေကိုတောင်း။ ဆနျ့ကငျြ, သာတစ်ဦးရှိပါတယ် သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်း အာရုံကြောဆဲလ် activation ထပ်တူ betwe ၏ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာသို့မဟုတ်ရေကဲ့သို့အခြားသဘာဝကဆုလာဘ် en ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွဒါဆွဲဆောင်မှုစေတူညီတဲ့အာရုံကြောဆဲလ်တွေကိုဖွင့်ခြင်း meth, ကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူဒီတော့စွဲလမ်းစေနိုင်ပါတယ်ရှင်းပြကူညီပေးသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာမှာဘိန်းဖြူစွဲသူများကပစ်ခတ်မှုသည်“ အော်ဂဇင်ကဲ့သို့ခံစားရသည်” ဟုမကြာခဏဆိုကြသည်။ သူတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းသည်ဘိန်းဖြူစွဲခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတူညီသောဆုိုင်နေသောဆားကစ်အာရုံကြောဆဲလ်များအပေါ်တုပသည်။ အထူးသ, သုတ်ရည်လွှတ်အာရုံကြောဆဲလ်တွေထုတ်လုပ်အတူတူ dopamine ကျုံ့ နာတာရှည်ဘိန်းဖြူအသုံးပြုမှုနှင့်အတူကျုံ့။ ဒါဟာလိင်မကောင်းဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။ စွဲလမ်းစေသောမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအိပ်ခန်းထဲသို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားသည့်တူညီသောယန္တရားများကိုပြန်ပေးဆွဲသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားရိုးရှင်းစွာအသိပေးသည်။
သည်အခြား Non-မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ် (မတူဘဲyummy အစားအစာသို့မဟုတ်သကြား)ဒါပေမယ့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဆင်တူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံရှည်-တည်မြဲအပြောင်းအလဲများမှဦးဆောင် ဆုလာဘ်စင်တာအချိုမှု receptors ၏နံပါတ်များနှင့်အမျိုးအစားများဖြစ်သည်။ အချိုမှုအကျိုးကိုစင်တာမှ key ကိုဦးနှောက်ဒေသများထံမှသတင်းအချက်အလက်များ relaying အဓိက neurotransmitter ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား neuroadaptations မြင်ကွင်းများ, အသံ, အတှေးအသို့မဟုတ်အလားအလာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဆက်စပ်အမှတ်တရများမှအကျိုးကိုစင်တာ ပို. ထိခိုက်မခံစေကြလော့။
ထို့အပွငျစင်တာဆုချ လိင်စိတ်နိုးထမှုအတွက် dopamine အဆင့်ဆင့် ထိုကဲ့သို့သော morphine, အရက် & နီကိုတင်း (အခြားမည်သည့်သဘာဝဆုလာဘ်ထက်အများကြီးပိုမိုမြင့်မား) အဖြစ်စွဲမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူမြင်သူတွေကိုပြိုင်ဘက်။ dopamine နှင့် opioid ပမာဏမြင့်မားခြင်းသည်ပန်းသီးစားခြင်းနှင့်စိတ်ကိုကြည်လင်သောအော်ဂဇင်ရှိခြင်းအကြားခြားနားချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အင်တာနက် porn စွဲလမ်းပါသလား
အဆိုပါ Klein အရေးဆိုမှုကို 2000 fMRI လေ့လာမှုအတွက်ရှည်လျားသောလွန်ခဲ့တဲ့စမ်းသပ်ပြီးနှင့် debunked ခဲ့: "Cue-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာ: neuroanatomical မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအဘို့တိကျတဲ့နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးလှုံ့ဆော်မှု။ တစ်ဦးချင်းစီအက်ကွဲကိုကင်း, 1) ပြင်ပသဘာဝမြင်ကွင်းများနှင့် 2) ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများဆေးလိပ်) 3: အဆိုပါလေ့လာမှုကိုကင်းစွဲခြင်းနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုများရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုခဲ့ရသည်။ ရလဒ်: သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ် porn နှင့်ကြည့်တွေကိုကြည့်ရှုသည့်အခါကင်းစွဲနီးပါးတူညီဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများရှိခဲ့ပါတယ်။ porn များအတွက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာ (သို့သော်ကင်းစွဲခြင်းနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှစ်ဦးစလုံး porn များအတွက်တူညီသောဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများရှိခဲ့။ ) သို့သော်စွဲနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခုလုံးအတွက်ဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများသဘာဝမြင်ကွင်းများကြည့်ရှုသည့်အခါပုံစံများအနေဖြင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြသည်။ နှုတ်ဆက်ပါတယ်ရီစရာစကားမှတ်!
အရေးကြီးသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအယူအဆမှာမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်“ လိင်” အာရုံခံဆဲလ်များကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေပြီးဆူညံသံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် မပါဘဲ အမှန်တကယ်လိင်။ အင်တာနက်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ဂေါက်သီးနှင့်နေဝင်ချိန်များ ကြောင်းကိစ္စအဘို့, ကောင်းသောအဟောင်းရော့ခ် & လိပ်မရနိုင်ပါ။
OK ကိုသင်ရပြီ။ အင်တာနက် porn သည်ထူးခြားသောသဘာဝလွန်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ dopamine ထုတ်လုပ်သည့်စက်ဖြစ်သည်။ သာမန်မေးခွန်းမှာ -
"ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို dopamine ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအကျိုးဆက်များဘာတွေလဲ? "
"ဖြစ်နိုင်ချေအကျိုးဆက်များလှုံ့ဆော်မှုများ၏တဦးတည်း combo တုံ့ပြန်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို dopamine ဘာတွေလဲ? (ဒီကိစ္စမှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနဲ့ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်) ။ ”
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်စေသောအမျိုးအစားတစ်မျိုးကို -“ဤသည်ကိုမည်သို့လူတွေကိုလိင်ရှိသည်, ငါကလုပျသငျ့ပုံ။ "အများစုက သုတေသနလုပ်ငန်း & လူကြိုက်များ ဆောင်းပါးများ အထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်၏ဤအမျိုးအစားပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ အလွန့်အလွန်အရေးကြီးသောသော်လည်း, YBOP လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်၏ဒုတိယအမျိုးအစားပေါ်အာရုံစူးစိုက်။
ဒုတိယအမျိုးအစားကို -“ဒီအကြှနျုပျအပျေါသို့လှည့်အရာဖြစ်တယ်.ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်နေသောဤလေ့လာသင်ယူမှုပုံစံတွင်လိင်မှုနှိုးဆွမှုအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ လိင်မှုနှိုးဆွမှုအတွက်ဗီဒီယိုမှဗီဒီယိုခလုတ်နှိပ်ခြင်း၊ porn-သွေးဆောင် fetishes အသုံးပြုသူများကသတင်းပို့သည်။
2) စွဲ -related ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများကို
ဒီပုံစံအမျိုးမျိုးလာကြ၏။ ဤရှုပ်ထွေးသော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများသည်ရောင်စဉ်တွင်ရှိပြီးပြည့်စုံသောစွဲလမ်းမှုမဖြစ်ပေါ်ဘဲဖြစ်ပွားနိုင်သည် porn အသုံးပြုသူများအပေါ်မှာဤလေ့လာမှု).
ဤတွင်အရေးပါသောအယူအဆင်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်နဲ့စွဲနှစ်ဦးစလုံး အဆိုပါဝေမျှ တူညီတဲ့ ထဲမှာဖြစ်ပေါ် key ကိုဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှု, တူညီတဲ့ ကအစပျိုးသောဖွဲ့စည်းပုံ, တူညီတဲ့ ဇီဝ signal ကို။
ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲ '' ဟုချေါသညျာင်း'' (သို့သော်အပြည့်အဝလွစွဲအဖြစ်ကောင်းစွာအပိုဆောင်းဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကပါဝငျ)
ဤသည်ဖွဲ့စည်းပုံမှာဆုလာဘ်စင်တာ (nucleus accumbens) ဖြစ်သည်။
အဆိုပါမူလတန်း signal ကို, သင်တန်း dopamine ဖြစ်ပါတယ်။
ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းကဲ့သို့သောကြီးမားသောဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်သောမြင်ကွင်းများ၊ အသံများ၊ အနံ့များ၊ ခံစားချက်များ၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အမှတ်တရများအားအတူတကွပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ ဦး နှောက်သည်အနာဂတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုလာဘ်စင်တာကိုလွင့်စင်သွားစေမည့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖန်တီးသောအခါအာရုံခံမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အချက်များသို့မဟုတ်အစပျိုးခြင်းများက activated သောအခါ, ဒီလမ်းကြောင်းအစွမ်းထက်, လျစ်လျူရှုရန်ခဲယဉ်း, ဖန်တီးပေးပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်သဘာဝကဆုလာဘ် (porn, junk အစားအစာ) ရက်နေ့တွင် Bingeing dopamine ၏မြင့်မား induces, သင့်စရိုက်ကဦးနှောက်အဖြစ်အနက်ဖွင့်ထားတဲ့: "ဤလုပ်ဆောင်မှုသည်အလွန်တကယ့်ကိုအဖိုးတန်ပြီးသင်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သင့်သည်။ " ဟုတ်ပါတယ်၊ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်အတွက်သင့်ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇတွေကိုဖြန့်တာထက်ပိုအရေးကြီးတာကမင်းရဲ့မြင့်မားတဲ့ ဦး နှောက်ကဖန်သားပြင်တစ်ခုပဲဆိုတာသဘောပေါက်ရင်တောင်ဘာမှအရေးမကြီးဘူး။ Dopamine ကငါတို့မျိုးရိုးဗီဇရှင်သန်မှုကိုအထောက်အကူပြုသည့်အရာ (ယူဆသည်) ကိုမှတ်မိစေရန်နှင့်ပြန်လုပ်ရန်ကူညီသည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုပြီးမြောက်စေသည်။
သင်၏ပြန်ပေးဆွဲခံရသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးမှု Dopamine သည် DeltaFos ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်B
A "မူးရူးယန္တရား" ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးသည်ပုံမှန်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုအားဖြင့်တိုးမြှင့်ခြင်းခံရသည့်အခြေအနေများတွင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်တောင့်တွင်တစ်ကြိမ်လျှင် ၂ ဝပေါင်အထိသတ်ပစ်နိုင်သောဝံပုလွေများကိုစဉ်းစားပါ။ သိုမဟုတ်ခဲယဉ်းသည့်ကာလများ၌ရှင်သန်ရန်လွယ်ကူသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အရည်အသွေးမြင့်သောကယ်လိုရီများကိုအပိုပေါင်အနည်းငယ်သိုလှောင်ရန်လိုသောကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများ။ ဒါမှမဟုတ်စိုစွတ်စေမယ့် Harem ရှိသည့်အခါမိတ်လိုက်ရာသီ။ အရင်တုန်းကဆိုရင်ဒီလိုအခွင့်အလမ်းတွေဟာရှားပါးပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ (နောက်ဆုံးသတင်း: တွေ့ရှိခဲ့ compulsive စား circuit ကို.)
ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်မှာအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ပါပြီ။ အင်တာနက်ကိုသူတို့ကိုသင်နိုင်အောင်နှိုးဆွသောရှာတွေ့သောကြောင့်, သင့်ရဲ့စရိုက်ကဦးနှောက်ကိုမှန်ကန်အဖြစ်ရိပ် မိ. သောအဆုံးမဲ့မိတ်လိုက်ခွင့်အလမ်းများကိုပေးထားပါတယ်။ မဆိုကောင်းသောနို့တိုက်သတ္တဝါအဖြစ်ကိုသင်အလိုအလျှောက်ကြိုးစားလိမ့်မယ် ဝေးနှင့်ကျယ်ပြန့်သည်သင်၏မျိုးဗီဇပြန့်နှံ့ပေမယ့်ရန်မအဆုံးရှိမယ့်ရန် သင့်ရဲ့ မိတ်လိုက်ရာသီ။
ကိုနှိပ်ပါ, ကိုနှိပ်ပါ, ကိုကလစ်, masturbate, ကိုနှိပ်ပါ, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, masturbate, ကိုနှိပ်ပါ, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ သင်၏ ဦး နှောက်ကိုကောင်းစွာခံထိုက်သောအနားယူခြင်းကိုဘယ်တော့မျှမပေး။ ဤသည်ကသင်၏မူးရူးယန္တရား overdrive သို့ကန်နိုင်ပါတယ်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုပြင်ဆင်မထားဘူး မရပ်မနားဆွဒီလိုမျိုးအဘို့။
ပိုလျှံစားသုံးမှု (အစားအစာသို့မဟုတ်လိင်) ဖြစ်ပါသည် အဆိုပါအချက်ပြမှု သငျသညျရှိသင့်တဲ့စရိုက်ဟာဦးနှောက်မှ အဆိုပါဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ထီပေါက် hit။ ၏ Over-စားသုံးမှုနေ့စဉ်ဆက်လက်မြင့်မားမှုနှင့်အတူ dopamine ခလုတ် ပရိုတိန်းများထုတ်လုပ်မှု DeltaFosB။ ဆက်လက် - စားသုံးမှုဆက်လက် သဘာဝကဆုလာဘ် (လိင်, သကြား, High-အဆီ, အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်း) သို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုနီးပါးမည်သည့်မူးယစ်ဆေးများနာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေး DeltaFosB ဖြည်းဖြည်းအကျိုးကို circuitry များတွင်စုပြုံမှကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ DeltaFosB အပါအဝင်အများအပြားဟာဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများအစပျိုးထားတဲ့အချို့မျိုးဗီဇမြှင့်လုပ်ဆောင် ာင်း။
နာတာရှည် overconsumption → Dopamine → DeltaFosB →အသိ
မူးယစ်ဆေးဝါးသည်စွဲလမ်းမှုကိုဖြစ်စေသည်ကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည် ရှိပြီးသားသဘာဝကဆုလာဘ်အဘို့အရာဌာန၌။ DeltaFosB ရဲ့တစ်ခု ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရည်ရွယ်ချက်များလှုံ့ဆော်ရန်ဖြစ်ပါသည် ငါတို့ကို“ ရသည့်အမှုအရာကောင်းနေစဉ်တွင်ရယူပါ။ ” ဒါဟာအဘို့အမူးရူးယန္တရားပါပဲ အစာ နှင့် များပြားအောင်လုပ်ခြင်း, အခြားအချိန်များနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်၌ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သော။ သဘာဝလွန်ဆုလာဘ်များထက်ထူးကဲသောဗားရှင်းများထွက်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်၎င်းသည်စွဲလမ်းစေသည် junk အစားအစာ နှင့် အင်တာနက်ညစ်ညမ်း 1-2-3 ကဲ့သို့လွယ်ကူသော။
အသိမြှမြား: A Pavlovian စူပါမှတ်ဉာဏ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
သင်ယူခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်နှင့်အလေ့အထများကိုအဟောင်းတွင်အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြနိုင်သည်။အတူတူပစ်ခတ်ကြောင်းအာရုံကြောဆဲလ်တွေကိုအတူတကွဝါယာကြိုး။ "
အဆိုပါ စွဲနောက်ကွယ်မှ rewiring တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ပေါ်ပေါက် DeltaFosBဒါကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူသူတို့ကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အဘို့အအောင်, အာရုံကြောဆဲလ်များအကြားဆက်သွယ်မှုခိုင်မာစေတော်မူသော။ DeltaFosB အကျိုးကို circuit ကိုအပေါ်ပြုမူနေစဉ်, ပိုမိုအားကောင်းအာရုံကြောဆက်သွယ်မှုအားလုံးသင်ယူမှုနောက်ကွယ်မှဖြစ်ကြသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါသည် ခေါ်တော်မူ neuroplasticity။ အဆိုပါ, အတွေ့အကြုံပိုမိုပြင်းထန်သော ဆက်သွယ်မှုအားကောင်း။ လျှပ်စစ် Impulses သတင်းပို့သည်ဤသစ်ကိုလမ်းကြောင်းတလျှောက်သွားလာများအတွက်ဆက်သွယ်မှုခိုင်မာခြင်း, ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
လေ့ porn ကြည့်ရှုစွဲ-related ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီဆိုရင်, သငျသညျအတုပါပြီ သင့်ဦးနှောက်ထဲမှာမြိုင်။ ရေအနည်းဆုံးခုခံ၏လမ်းကြောင်းမှတဆင့်စီးဆင်းဒါ Impulses သတင်းပို့နှင့်အရှင်အတှေးအလုပျသကဲ့သို့။ မည်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူအမျှပိုငျကလုပျသည်ပိုမိုလွယ်ကူကျင့်သုံးပါ။ မကြာခင်မှာပဲသူက အလိုအလျောက်ဖြစ်လာမည်သည့်သတိအတွေးမပါဘဲ။ မင်း ဦး နှောက်ထဲမှာနက်ရှိုင်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံကိုသင်ဖန်တီးခဲ့တယ် အာရုံကြောလမ်းကြောင်း sensitized ။
Sensitized လမ်းကြောင်း အဖြစ်ယူဆနိုင်ပါတယ် Pavlovian အေးစက် Turbo ပေါ်မှာ။ တို့က activated လိုက်တဲ့အခါ အတှေးအသို့မဟုတ်အစပျိုးခြင်း, sensitized လမ်းကြောင်းခက်ခဲ-to-လျစ်လျူရှုမတရားသောတက်ပစ်ခတ်, အကျိုးကို circuit ကိုဗုံး။ (porn အသုံးပြုသူများကိုအပေါ်အများအပြားကမကြာသေးခင်ကဦးနှောက်လေ့လာမှုများာင်းအကဲဖြတ်ခြင်း, အရက်သမားနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲတွင်တွေ့မြင်အဖြစ်အားလုံးအတူတူပင်ဦးနှောက်ကိုတုန့်ပြန်အစီရင်ခံတင်ပြ25 လေ့လာမှုများနှင့် ပတ်သက်. porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲအတွက်ာင်းအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ)
DeltaFosB သည်တဖြည်းဖြည်းပျက်စီးလာပြီးစွဲလမ်းသူကိုနောက်ဆုံးအသုံးပြုပြီးနောက် ၂ လခန့်အကြာတွင်ပုံမှန်အဆင့်သို့ပြန်ရောက်သွားသည်။ DeltaFosB မရှိတော့သော်လည်းအထိခိုက်မခံသောလမ်းကြောင်းများသည်တစ်သက်တာအတွက်ကျန်ရှိနိုင်သည်။ သတိရပါ၊ DeltaFosB ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသင်အလွန်အကျွံသုံးစွဲနေသည့်အရာမှပိုမိုကြီးမားသောပေါက်ကွဲမှုကိုခံစားရစေရန် ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်လည်ပတ်စေခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤမှတ်ဉာဏ် (သို့) နက်ရှိုင်းစွာအမြစ်စွဲနေသောသင်ယူမှုသည်ဖြစ်ရပ်ပြီးနောက်ကြာမြင့်စွာတည်ရှိသည်။ စွဲလမ်းမှုသည်အမှန်တကယ်ပျက်စီးခြင်းမဟုတ်ပါ ရောဂါဗေဒသင်ယူမှု.
လူအများကသိသာထင်ရှားသည့်မေးခွန်းကိုမေးကြသည် -အလွန်အကျွံဘယ်လောက်ဖြစ်ပါသည်?” ဒီမေးခွန်းကယူဆတယ် porn ရဲ့သက်ရောက်မှု binary ဖြစ်ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်တစ်ခုခုကိုမျှမပြဿနာရှိသည်, ဒါမှမဟုတ်သင်တစ်ဦးညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူများမှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ရောင်စဉ်အပေါ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်ဖြစ်စေ, အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်အဖြစ်ခွဲခြား / သို့မဟုတ်မရနိုင်ပါ။ တလိုင်းဖြတ်သန်းသွားသည်ဘယ်မှာတောင်းဆိုနေတာ neuroplasticity ၏နိယာမလျစ်လျူရှု: ဦးနှောက်ကိုအမြဲလေ့လာသင်ယူပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတုံ့ပြန်ပြွီးဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်, အဲဒါကိုသာ5ရက်ပေါင်းယူ တခုတ်တရာင်းသွေးဆောင် ကျန်းမာလူငယ်လူကြီးများအတွက်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုရန်။ ဂိမ်းကစားသူများသည်စွဲလမ်းခြင်းမရှိသော်လည်း ဦး နှောက်၏လှုပ်ရှားမှုများကိုမြှင့်တင်ခြင်းဖြင့်ကစားရန်စိတ် ၀ င်စားမှုများ In အခြားစမ်းသပ်မှုကြွက်များအားလုံးနီးပါးသည်“ ကော်ဖီဆိုင်စားနပ်ရိက္ခာ” ကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာသုံးစွဲခွင့်ပေးပြီးအဝလွန်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သည်။ ကြွက်များ၏ dopamine receptor များကျဆင်းသွားရန် (သူတို့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုလျှော့ချရန်) ရက်အနည်းငယ်သာအစာမစားဘဲစားခဲ့သည်။ စိတ်ကျေနပ်မှုလျော့နည်းခြင်းကကြွက်များကို ပို၍ ပင်မူးယစ်စေနိုင်သည်။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းကြောင့်ဒီ ဂျာမန်လေ့လာမှု လူတို့သညျအပျေါ မဟုတ် porn စွဲစွဲလမ်း-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများနှင့်စားသုံးပိုပြီး porn နှင့်အတူ correlating porn မှလျော့နည်းဦးနှောက်ကို Activation တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦး အီတလီလေ့လာမှု တစ်ပါတ်သညျ့အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကြုံတွေ့တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး porn ကိုလောင်ခဲ့သူအထက်တန်းကျောင်းကျကွီးရှယျအိုမြား၏ 16% တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသတင်းပို့သည် non-porn အသုံးပြုသူ 0% မှနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ အထီးပါဝင်သောထိုမှတပါး, တိုင်းလေ့လာမှု (70 လေ့လာမှုများကျော်) နှင့်ဆက်စပ်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံထားသည် ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။ အဆိုပါပယ်ရှားတော်မူစွဲသိသာဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုဖြစ်စေဘို့မလိုအပ်ပါကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးရှင်းစွာထားပါ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်, သတိထား, သို့မဟုတ်အခြားစွဲ-related ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ရောင်စဉ်အပေါ်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်အဆက်မပြတ်သင်ယူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်လိုက်လျောညီထွေကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း, ပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆားကစ်ပစ်မှတ်ထားတဲ့ supernormal လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ခြင်း, ဦးနှောက်နှင့်အတ္တ ဟူ. သော်လည်းကောင်းအမြင်ပုံစံသွင်းသွင်း။
ထို့ကြောင့်“ မေးခွန်း” ကဲ့သို့သောမေးခွန်းများကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။"porn ၏အဓိပ္ပါယ်ကဘာလဲ?” ဒါမှမဟုတ် "ဘယ်လောက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုတစ်ခုစွဲပါဝင်သည်?” အထင်အမြင်မှားစေနှင့်ဆီလျှော်ဖြစ်ကြသည်။ အရင်ဂိမ်းကစွဲလမ်းစေတဲ့ slot machines လား Blackjack လားဆိုတာမေးတာပါပဲ။ နောက်တစ်ခုမှာသူမစားသည့်မိနစ်မည်မျှသောက်နေရသည်ကိုမေးမြန်းခြင်းနှင့်တူသည်။
အကျိုးကိုစင်တာ (နျူကလိယ accumbens)“ porn” ဆိုတာဘာလဲမသိဘူး။ ဒါဟာမှတဆင့်ဆွအဆင့်ဆင့်မှတ်ပုံတင်ထား dopamine spikes။ ဒါဟာဇီဝြဖစ်စဉ်ကိုမကငျြ့တရားသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးဖြစ်ပါတယ်။
အရက်သောက်ခြင်းနှင့်ကိုကင်းကဲ့သို့သော dopamine ထုတ်လွှတ်သည့်အရာများသည်စွဲလမ်းစေနိုင်သည်ကိုလူအများသိထားကြသည်။ သို့သျောလညျးကိုသာ 10-20% သာ လူသားမြားသညျ or တိရစ္ဆာန်များ ကြောင်းစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ (ကိုသုံးပါနီကိုတင်း မှလွဲ.) အစဉ်အဆက်စွဲဖြစ်လာသည်။ ဒီကျွန်တော်တို့ကို၏ကျန်မူးယစ်ဆေးစွဲကနေဘေးကင်းလုံခြုံများမှာဆိုလိုပါသလား? ဖြစ်ကောင်း။ ဒါကြောင့်နှစ်ဦးစလုံး, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမှကြွလာသည့်အခါ မျိုးရိုးဗီဇ နှင့် ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဖိစီးမှု သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍကစား။
သို့ရာတွင်ကဲ့သို့သောသဘာဝကဆုလာဘ်၏စူပါလှုံ့ဆော်ဗားရှင်းတားမြစ်ခြင်းမရှိသော access ကိုမှကြွလာသောအခါ အာဟာရပါဝင်မှုနည်းပါးပြီးကိုလက်စထရောများသောအစားအစာ, သို့မဟုတ်ပင် ဗီဒီယိုဂိမ်းများ, အဖြေဖြစ်ပါသည် အဘယ်သူမျှမစင်စစ်မဟုတ်တိုင်းအသုံးပြုသူချိတ်ဆက်ရရှိပေမယ့်။
ဤသည်ကိုရှင်းပြကူညီပေးသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမေရိကန်များ၏ 39% အဝလွန်ဖြစ်ကြပြီး 75% သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအဝလွန်နေကြသည်အဘယ်ကြောင့်သူတို့ထဲကဘယ်သူမှဖြစ်လိုသော်လည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်ဆားကစ်တက်လာသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်ဘာဂါ၊ ကြော်နှင့် milkshakes တို့တွင်ကယ်လိုရီ ၁၅၀၀ ကိုအလွယ်တကူကျဆင်းနိုင်သည်။ တစ်နေ့တည်း (သို့မဟုတ်တစ်နေ့တွင်) ခြောက်သွေ့နေသောပီကေနှင့်အသားပြုတ်ဓာတ် ၁၅၀၀ ကယ်လိုရီကိုဖြိုချရန်ကြိုးစားပါ။
ယနေ့ မြင့်မားသောအဆီ / သကြားအစားအစာများ နှင့် အင်တာနက်ညစ်ညမ်း (သင်ကဒီဖတ်နေပါတယ်) ကိုရှိ ချိတ်ဖို့အလားအလာ မူးယစ်ဆေးဝါးများလုပ်ပေးထက် ပို. ပင်လူတွေ။ ဤ supernormal ဗားရှင်း သဘာဝကဆုလာဘ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထပ်ရေးနိုင်ပါသည် ဦးနှောက်ရဲ့ satiation ယန္တရားများစုစည်းကယ်လိုရီနှင့် fertilization အခွင့်အလမ်းများသင့်ရဲ့ဗီဇ '' ထိပ်တန်းဦးစားပေးဖြစ်ကြောင်းဖွဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခံစားချက်-"ငါပြုတယ်" ။ မြင့်မားသည့်အကြောင်းရင်း အစားအစာကိုလှုံ့ဆော်ဖို့ဗားရှင်း လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစွဲလမ်းမှုမှမကူးစက်နိုင်သည့်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းသည်ပြောင်းလဲလာခြင်းပင်ဖြစ်သည် အစားအစာဆီသို့ကျွန်တော်တို့ကိုမောင်းထုတ် နှင့် လိင်မဟုတျဘဲမူးယစ်ဆေးဝါးများ။
အပြုအမူနှင့်ဓာတုဗေဒစွဲလမ်းမှုသည်တူညီသောအခြေခံယန္တရားများနှင့် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများစွာကိုမျှဝေသည်
မူးယစ်ဆေးဝါးများရှိပြီးသားဇီဝကမ္မလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသာမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်တားစီးနိုင်ပါတယ်အတိုင်းဤအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ မူးယစ်ဆေးဝါးဆယ်လူလာ function ကိုပွောငျးလဲအဆိုပါတိကျတဲ့လမ်းက၎င်း၏ "လုပ်ဆောင်ချက်ယန္တရား" ဟုခေါ်သည်။ ထဲမှာ dopamine ၏မြင့်: အလားအလာလုပ်ဆောင်ချက်စွဲရှယ်ယာများထဲမှအရေးကြီးသောယန္တရားဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုအားလုံးမူးယစ်ဆေးနှင့်အပြုအမူ နျူကလိယ accumbens (ဒါ့အပြင်ဆုလာဘ်စင်တာဟုခေါ်တွင်) ။
1. အသိ (cue-reactivity & cravings)
လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆုချခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သော ဦး နှောက်ဆားကစ်များသည်အမှတ်တရများကိုအာရုံမခံစားနိုင်အောင်ဖြစ်လာသည် ဆက်စပ်တွေကို အဆိုပါစွဲလမ်းအပြုအမူဖြစ်သည်။ ဤသည်၌ရလဒ်များ နုတ်မ like နှိပ်သို့မဟုတ်အပျြောအပါးနေချိန်တွင် "လို" သို့မဟုတ်တဏှာတိုးလာ။ ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ခြင်း၊ ပေါ်ပေါက်ခြင်း၊ အထီးကျန်ခြင်းစသည့်ပြသနာများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပြင်းထန်စွာစွဲလမ်းစေသည်။ ဤရွေ့ကားလျစ်လျူရှုရန်ခဲယဉ်းသည်။ အချို့ကအလွန်ထိရောက်သောညစ်ညမ်းမှုတုံ့ပြန်မှုကို 'ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုထဲသို့ဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သငျသညျတုန်လှုပ်ပင်လျှင်အလျင်အမြန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နှလုံးခုန်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ သင်စဉ်းစားနိုင်သမျှသည်သင်အကြိုက်ဆုံးဆိုဒ်သို့ဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ / လိင်စွဲလမ်းသူများအတွက်အထိခိုက်မခံခြင်းသို့မဟုတ် cue-reactivity ကိုအစီရင်ခံသည့်လေ့လာမှုများ - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23, 24, 25, 26, 27.
2. Desensitization (အကျိုးခံစားခွင့်လျော့နည်းသက်သာခြင်းနှင့်သည်းခံမှုလျော့နည်းသွားခြင်း)
၎င်းတွင်ရေရှည်ဓာတုနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကြောင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီမှထွက်ခွာသွားသည် အပျော်အပါးမှလျော့နည်းထိခိုက်မခံတဲ့။ Desensitization သည်မကြာခဏဆိုသလိုသည်းခံမှုအဖြစ်ပြသခြင်းဖြစ်ပြီး၊ တူညီသောတုန့်ပြန်မှုကိုရရှိရန်ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးထိုးရန်သို့မဟုတ် ပိုမို၍ လှုံ့ဆော်ရန်လိုအပ်သည်။ အချို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်အွန်လိုင်းတွင်အချိန်ပိုကုန်ကြသည်။ အနားယူရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဗွီဒီယိုကိုရှာဖွေခြင်း၊ အနားမယူသည့်အခါစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ Desensitization သည်အမျိုးအစားအသစ်များသို့တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံ ပို၍ ခက်ခဲပြီးလူစိမ်းသို့မဟုတ်နှောင့်ယှက်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိတ်လန့်ခြင်း၊ အံ့အားသင့်ခြင်း (သို့) စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းအားလုံးသည် dopamine ကိုမြင့်တက်စေပြီးလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုအချို့တွင်လေ့ကျင့်မှုလေ့ကျင့်ခန်းသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုယန္တရားများပါ ၀ င်သော“ လေ့ကျင့်ခြင်း” ဟူသောဝေါဟာရကိုအသုံးပြုသည်။ ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ / လိင်စွဲလမ်းသူများအတွက်စိတ်မသက်မသာဖြစ်မှု (သို့) အလေ့အကျင့်ရှိခြင်းကိုသတင်းပို့ခြင်း။ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3. အလုပ်မဖြစ် prefrontal ဆားကစ် (အားဖြည့်စွမ်းအားကိုအားနည်းစေခြင်း၊
အလုပ်မဖြစ် prefrontal cortex လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသို့မဟုတ်ဆုလာဘ်စနစ်နှင့် prefrontal cortex အကြားဆက်သွယ်မှုများကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်ထကြွလွယ်သောထိန်းချုပ်မှုကို ဦး တည်စေသည်၊ ဤအလုပ်မဖြစ်သော prefrontal ဆားကစ်များသည် ဦး နှောက်၏အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုသည်စစ်ပွဲတစ်ခုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟူသောခံစားချက်ကိုဖော်ပြသည်။ အဆိုပါအထိခိုက်ခံစွဲလမ်းများ 'ဟုတ်ကဲ့!' ဟုအော်ဟစ်နေကြသည် သင်၏ ဦး နှောက်က 'မဟုတ်ပါ၊ နောက်တဖန်မလုပ်ပါနှင့်' ဟုဆိုနေစဉ် သင့် ဦး နှောက်၏အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းများသည်အားနည်းသောအခြေအနေတွင်ရှိနေပြီးစွဲလမ်းများသည်များသောအားဖြင့်အနိုင်ရသည်။ ပိုမိုဆိုးရွားသည့်အလုပ်အမှုဆောင် (hypofrontality) သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုသူများနှင့်လိင်စွဲသူများအတွက်ကြိုတင်မျက်နှာချင်းဆိုင်လှုပ်ရှားမှုများကိုအစီရင်ခံသည့်လေ့လာမှုများ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
4. ချွတ်ယွင်းစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်က (ပိုမိုစွဲလမ်းခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများ)
အချို့သောကျွမ်းကျင်သူများသည်စွဲလမ်းမှုကိုစိတ်ဖိစီးမှုရောဂါဟုရှုမြင်ကြသည်။ အကြောင်းမှာနာတာရှည်အသုံးပြုခြင်းသည် ဦး နှောက်၏စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်သွေးလည်ပတ်စေသောစိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းများ (cortisol နှင့် adrenaline) တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ စိတ်ဖိစီးမှုနည်းသောစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်တစ်ခုကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုနည်းသောစိတ်ဖိအားကိုပင်ဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊ ထို့အပြင်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းက ဦး နှောက်၏စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကိုသက်ဝင်စေပြီးစိုးရိမ်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အလွန်အကျွံတက်ကြွစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု impulse ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ရပ်များ၏အကျိုးဆက်များကိုအပြည့်အဝနားလညျနိုငျအပါအဝင် prefrontal cortex နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတားဆီး။ ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများ / လိင်စွဲသူများအတွက်စိတ်မချရသောစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်ကိုညွှန်ပြသည့်လေ့လာမှုများ - 1, 2, 3, 4, 5.
ဤသာဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပါသလား အမှတ်သည်ဤကျယ်ပြန့်ဖြီးညွှန်းကိန်းတစ်ခုချင်းစီမျိုးစုံသိမ်မွေ့ထင်ဟပ် စွဲ-related ဆယ်လူလာများနှင့်ဓာတုပွောငျးလဲကင်ဆာအကျိတ်များ၏စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုနှင့်ဆက်စပ်သောသိမ်မွေ့ဆယ်လူလာ / ဓာတုအပြောင်းအလဲများမပြသနိုင်သကဲ့သို့။ လိုအပ်သောနည်းပညာများ၏ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်မှုကြောင့်သိမ်မွေ့သောပြောင်းလဲမှုအများစုကိုလူ့ပုံစံများတွင်အကဲဖြတ်။ မရပါ။ သို့သော်၎င်းတို့သည်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များတွင်ဖော်ထုတ်ထားသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှစ်ခုလုံးတွင် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖော်ပြသည့်ဤသုံးသပ်ချက်ကိုကြည့်ပါ။ သဘာဝဆုလာဘ်များ, Neuroplasticity, နှင့် Non-မူးယစ်ဆေးစွဲ (2011)
အပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်တပ်မက်ခြင်းကသင့်အားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုရန်ဖိအားပေးသောကြောင့်ဆုချသောနေရာ၏အလွန်အမင်းထင်မြင်ချက်သည်ဒေသတွင်းပုန်ကန်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ dopamine အားဖြင့်ထိုးနှက်ထားသောအာရုံကြောဆဲလ်များက“ လုံလောက်သည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကဆက်ပြီးဆူညံနေရင်၊ dopamine ပေးပို့သည့်အာရုံကြောဆဲလ်များသည် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သောအခါလက်ခံသည့်အာရုံကြောဆဲလ်များသည်သူတို့၏“ နားများ” ကိုဖုံးအုပ်ထားသည် dopamine (D2) receptors လျှော့ချ။ ပိုဆိုးတာကစေရန်, D2 receptors Over-စားသုံးမှုအပေါ်ဘရိတ်ထားကူညီနိုင်အောင်သူတို့ရဲ့အရှုံးနည်းလမ်းများ မတရားသောခက်ခဲရှိပါတယ် ခုခံတွန်းလှန်ရန်။ Desensitization လည်း dopamine နဲ့ opioids နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ကျဆင်းမှုပါဝငျသညျ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်ဦး porn သုံးစွဲသူများ 2014 ဦးနှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးလေ့လာမှု သာ. ကြီးမြတ် desensitization (ဆုလာဘ် circuit ကိုမီးခိုးရောင်ကိစ္စဆုံးရှုံးမှုနည်းလိင်စိတ်နိုးထ) နဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည် သာ. ကြီးမြတ် porn အသုံးပြုမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
မကြာခင်မှာပဲသင်ဟာ porn ကိုချိတ်ဆက်မိလာပြီ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင့် ဦး နှောက်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာတခြားဘာမှမရှိဘူး။ သင့်ရဲ့မျိုးဗီဇရှုထောင့်ကကြည့်လျှင်ဒီ“ အဖိုးတန်မိတ်လိုက်အခွင့်အလမ်း” မပျောက်ကွယ်မီသင့်ကိုအာဟာရဓာတ်များစွာပေးပြီးထိန်းသိမ်းထားရန်အကောင်းဆုံးသောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။
sensitization နှိုင်းယှဉ် Desensitization
Desensitization ကိုသင် numbs နေ့စဉ်အပျော်အပါးတွေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်ဟာသင့်ရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အရာအားလုံးကိုသင့် ဦး နှောက်ကိုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်စေတယ်။ အချိန်ပို, ဒီ Dual-ရှေ့ကနေယန္တရား porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အရိပ်အယောင်မှာသင်တို့၏အကျိုး circuitry Buzz ရှိသည်, ဒါပေမယ့်နိုင်ပါတယ် enthused ထက်လျော့နည်း အစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်နှင့်အတူတင်ပြတဲ့အခါ။ Desensitization "ပျက်စီးမှု" မဟုတ်ပါဘူး။ သင်၏အာရုံကြောဆဲလ်များသည်ပျောက်သွားသော dopamine သို့မဟုတ် opioid receptors များကိုလျှပ်တစ်ပြက်ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်သည်။ ယင်းအစား, desensitization တစ် ဦး ကိုကိုယ်စားပြုတယ် အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်စနစ်က Overdrive အတွက် (ဖြစ်ကောင်းဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုပြောင်းလဲမှုများကိုအားဖြင့်ထိန်းသိမ်းထား) ။
အကယ်၍ ဒီအာရုံကြောပလပ်စတစ်ပြောင်းလဲမှုနှစ်ခုကစကားပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်၊ကျေနပ်မှုမရနိုင်ဘူး” ဒါဟာအားလုံးနိမ့် dopamine အချက်ပြအကြောင်းပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ထိခိုက်လွယ်မှုကသင့်အားနံရိုးများပေါ်ထိုးဖောက်ကာ“ မင်းကိုပြောတာက၊ဟေးရဲ့ buddy, သင်တို့ကိုငါမလိုအပ်ရုံသောအရာကိုတယ်, "desensitization စေသောအလွန်အရာဖြစ်ဖြစ်ပျက်။
မတရားသောနှင့်ရေတိုရေရှည်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း (ထိခိုက်လွယ်) မှဦးဆောင်နေတဲ့နက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုလမ်းကြောင်းနဲ့ပေါင်းစပ်တစ်ဦးက numbed အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှု (desensitization), အများစုစှဲမောင်းအရာဖြစ်တယ်။
ဖွံ့ဖြိုးဆဲ သည်းခံနေခြင်း (numbed pleasure response) စွဲစွဲလမ်းသူအားသူ၏တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်သူ / သူမ၏မူးယစ်ဆေးဝါးများပိုမိုလိုအပ်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ ပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်သည်းခံစိတ်သည်၎င်းတို့၏အစောပိုင်းအရသာများအတွက်တည်ဆောက်ပေးသည်ကိုသတိပြုမိကြသည်။ သူတို့သစ်ကိုလမ်းညွန်အတွက်ရွှေ့ ပြင်းထန်သော arousal ဘို့မိမိတို့ရှာဖွေရေးအတွက်။ အတော်များများထွက်ရှာအံ့သောငှါ အဘယ်အရာကိုလှုပ်ခြင်း သူတို့ကို-ဖြစ်ကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တားမြစ်သည် နှင့် "ကွောကျမကျကိုထုတ်လုပ်“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုအပြင် ဦး နှောက်နှင့်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာပိုမိုကြီးကျယ်ခိုင်းခြင်းကိုအနည်းဆုံးအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပြုလုပ်ပါ။
ဒါကြောင့်မို့လို့သင့်ရဲ့ porn အလုပ်အကိုင်ကိုကျော်ကြားတဲ့ Hottie ၏ပုံကောင်းနှင့်စတင်ခြင်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောအရာမဟုတ်ပါ။ ပြီးတော့လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်မင်းဟာဆိတ်တွေဒါမှမဟုတ်အကြမ်းဖက်မုဒိမ်းမှုမြင်ကွင်းတွေနဲ့မိန်းကလေးတွေကို“ တိုးတက်အောင်” လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ စိတ်ကိုထားပါ ကြောင်းလာသောအခါတစ်ဦးစှဲလမျးသူကြောင့် အသစ်ကအမျိုးအစားမှကိုအရှိန် သို့မဟုတ်စိတ်ကျေနပ်မှုများရှာဖွေရေးအတွက်အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုနာရီတွင်းသို့သူ desensitization မောင်းနှင်နေသည်။ မိမိအအခြေခံလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်မထားပါဘူး။
နောက်ဆုံးတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာဒီနေ့ညစ်ညမ်းတဲ့သုံးစွဲသူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအပြည့်အဝလိုက်မီနိုင်ပါပြီ။ ဒါ 2016 ဘယ်လ်ဂျီယံလေ့လာမှု စစ်တမ်းကောက်ခံခဲ့သည့်အမျိုးသားများ၏ထက်ဝက်သည်ယခင်ကတွေ့ရှိခဲ့သောပစ္စည်းများကို“ စိတ်မ ၀ င်စားခြင်း၊ ဦး နှောက်အတွင်းအဘယ်အပြောင်းအလဲများသည်ဤသို့ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့နေသည်ကိုအခြေခံသနည်း။ 2014 ခုနှစ်တွင်တစ် ဦး ကင်းဘရစ်အသင်း ဦးနှောက် Scan ဖတ်သုံးပြီးပြဿနာ porn အသုံးပြုသူများကိုပိုမိုလျင်မြန်စွာထိန်းချုပ်မှုထက်ပုံရိပ်တွေမှ habituated ကြောင်းအစီရင်ခံခြင်းနှင့်အသစ်အဆန်းပိုပြီးစေ့စေ့နားထောင်ကြ၏။ စိတ်ဝင်စားစရာသူတို့ porn အသုံးပြုမှုကိုသော့ကို variable ကိုဖူးခဲ့ကြပေမည်အကြံပြုသောထိန်းချုပ်မှုထက်အာရုံ-ရှာရန်မပိုကျရောက်နေတဲ့ခဲ့ကြသည်။
အောက်ခြေလိုင်း: အ ပိုပြီးပြင်းထန်သည့်ဆက်စပ်ဖြစ်ရပ်များ (အော်ဂဇင် + ဗီဒီယို), ဒါမှမဟုတ်သူတို့ထပ်တလဲလဲနေသောပိုခိုင်မာသည့်ဝါယာကြိုး။ တစ်ခုချင်းစီကိုအတှေ့အကွုံဝါယာကြိုးသစ်ကိုအရသာ ဦးနှောက်သို့။ သင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကယ်. အရသာပြောင်းလဲပြီ ဒါကြောင့်သင့်ဦးနှောက်ရှိပါတယ်။ ယနေ့အထိ, 45 လေ့လာမှုများကျော်လက်ရှိ porn မှတင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက် (သည်းခံစိတ်) သို့မဟုတ်လေ့အစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ။
အချို့ကဓာတုပစ္စည်းများသာမဟုတ်၊ အင်တာနက်ညစ်ညမ်း အသုံးပြုမှု, စွဲစေနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ဦး နှောက်အပေါ်စွဲလမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာသောအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များ ကွဲပြားခြားနားကိုသိရ။ နယ်ပယ်မှကျွမ်းကျင်သူများသည်စွဲလမ်းမှုကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်သတ်မှတ်ကြသည်။ စွဲလမ်းမှုကိုနားလည်ရန်ရိုးရှင်းသောပုံစံမှာ Cs လေးလုံးကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်သည်။
တောင်းပန် - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ညစ်ညမ်းသောဆေးစွဲသူများသည်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ခြင်းလက္ခဏာများနှင့်သည်းခံစိတ်များ (အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်ပိုမိုလှုံ့ဆော်မှုလိုအပ်ခြင်း) နှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုများမရှိခြင်းသည်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမရှိ” ဟုဆိုသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်သည်းခံနိုင်ခြင်းနှင့်ရက်စက်စွာရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများသည်စွဲလမ်းမှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများမဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, စီးကရက်နှင့်ကိုကင်းစွဲစွဲလမ်းစွာချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အရက်နှင့်ဘိန်းဖြူစွဲသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်းတို့သည်ဆေးကုသမှုခံယူခြင်းအတွေ့အကြုံနည်းသည်။ (စွဲလမ်းမှုအကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုအားလုံးတွင်“ အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သောအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းဆက်လက်သုံးစွဲခြင်း” ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စွဲလမ်းမှု၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောအထောက်အထားဖြစ်သည်။ )
သို့သော်ကျွန်မဟောင်း porn အသုံးပြုသူများကိုစောင့်ကြည့်သည့်ဖိုရမ်များထဲမှာမှန်မှန်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပြင်းထန်သတင်းပို့ ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေမူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်ယူ၏ဆင်တူဖြစ်ကြောင်း: အိပ်မပျော်, စိုးရိမ်စိတ်, ယားယံခြင်း, စိတျအပွောငျးအလဲ, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, နာမငြိမ်, ဆင်းရဲသောအာရုံစူးစိုက်မှု, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်, စိတ်ကျရောဂါ, လူမှုရေးသွက်ချာပါဒနဲ့ယောက်ျားတွေ (porn ဆုတ်ခွာရန်ပုံထူးခြားသော) က '' flatline '' ဟူ. ခေါ်ကြောင်းလိင်စိတ်၏ရုတ်တရက်အရှုံး ။ ယူ ဒီပဟေဠိ အဆိုပါစွဲဖြစ်စဉ်ကိုသင့်ဦးနှောက်ထဲမှာကိုင်ယူပြီးလျှင်ကြည့်ပါရန်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကလေးယောက်သုတေသနအဖွဲ့များအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအမေးမလျှောက်သော 2017 သည်အထိမဟုတ်ခဲ့ တိုက်ရိုက် အကြောင်းကိုဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေ။ အားလုံး "ပြဿနာ porn အသုံးပြုသူများသည်" တွင်ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေကဖော်ပြခဲ့သည်: 1, 2, 3. 4.
ဒါ့အပြင်ဆွမ်ဆီးနှင့်မီလန်တက္ကသိုလ်များ porn သို့မဟုတ်လောင်းကစားဝိုင်းကိုရယူသုံးခဲ့အများစုမှာအင်တာနက်စွဲ, အအေးကြက်ဆင်၏ပုံစံကိုခံစားခဲ့ရကြောင်းအစီရင်ခံ သူတို့က web သုံးပြီးရပ်တန့်သည့်အခါရုံမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုချွတ်လာမယ့်လူတွေကြိုက်တယ်။
သည်းခံစိတ်သည်4လေ့လာမှုများယခုတိုက်ရိုက်နှစ်ဦးစလုံးအတည်ပြု, အထူးသအသစ်များကိုအမျိုးအစားများသို့မဟုတ်သည်းခံစိတ်သို့တင်းမာမှုနှင့် ပတ်သက်. porn အသုံးပြုသူများကိုမေးမွနျးခဲ့ကြ (1, 2, 3, 4) ။ အမျိုးမျိုးသောသွယ်ဝိုက်နည်းလမ်းများအလုပ်သမား, တစ်ဦးအပိုဆောင်း 45 လေ့လာမှုများ တွေ့ရှိချက်များကို“ ပုံမှန်ညစ်ညမ်းသောအကျင့်” သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ကိုက်ညီသောအစွန်းရောက်မှုများ၊ သည်းခံစိတ်၏လက္ခဏာအားလုံး။
အဆိုပါ စွဲလမ်းဆေးပညာ American Society (ASAM) - 'လိင်အပြုအမူစွဲလမ်းမှုတည်ရှိ!'
အစစ်အမှန်စွဲကျွမ်းကျင်သူများသည် စွဲလမ်းဆေးပညာများအတွက်အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်း, သုတေသနဆယ်စုနှစ်များစွာပေါ်အခြေခံပြီးဒီရိုးရှင်းတဲ့အယူအဆအလေးပေးပြောကြား: စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို, ရောဂါလက္ခဏာနှင့်အပြုအမူပြအဆိုပါညွှန်ပြ နောက်ခံဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ပါပြီ။
အဆိုပါ စွဲလမ်းဆေးပညာ American Society (ASAM) YBOP အွန်လိုင်းသို့ သွား. တဆယ်လအကြာသြဂုတ်လ, 2011 အတွက်ညစ်ညမ်း-စွဲဆွေးနွေးငြင်းခုံအခေါင်းအတွက်နောက်ဆုံးလက်သည်းပါပြီသငျ့သညျအဘယျသို့ထု။ ASAM မှာအမေရိကားရဲ့ထိပ်တန်းစွဲကျွမ်းကျင်သူများကသူတို့ရဲ့ဖြန့်ချိ စွဲလမ်းအသစ်များနှင့်အဓိပ္ပါယ်လောကထဲကလူတော်တော်များများ။ အသစ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် အဓိကအချက်များကိုပဲ့ ဒီ website တွင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ မူးယစ်ဆေးဝါးများလုပ်ပေးအဖြစ်ဗွေဆော်, အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုတူညီသောအခြေခံနည်းလမ်းတွေထဲမှာဦးနှောက်ကိုထိခိုက်စေ။ တစ်နည်းပြောရရင်တော့, စွဲလမ်းအများအပြားမဟုတ်, တဦးတည်းရောဂါ (ခွအေနအေ) ဖြစ်ပါသည်.
လိင်နှင့် porn စွဲလမ်း
လက်တွေ့ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုရှိ၊အစစ်အမှန်စှဲ။ "ASAM အတိအလင်းဖော်ပြထား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစှဲတည်ရှိ နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းတှငျတှေ့တူညီတဲ့အခြေခံဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကြောင့်ဖြစ်ပွားရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ASAM အမေးအဖြေများမှ:
အဖြေ: ASAM ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်စွဲလမ်းမှုသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောအပြုအမူများနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်ပုံကိုဖော်ပြခြင်းအားဖြင့်စွဲလမ်းမှုကိုပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှုနှင့်တူညီခြင်းမှကင်းဝေးစေသည်။ ... ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကစွဲလမ်းမှုသည်လည်ပတ်မှုနှင့် ဦး နှောက်ပတ် ၀ န်းကျင်အကြောင်းဖြစ်သည်။ စွဲလမ်းမှုရှိသူများ၏ ဦး နှောက်၏တည်ဆောက်ပုံနှင့်လုပ်ဆောင်ပုံသည်စွဲလမ်းမှုမရှိသောလူများ၏ ဦး နှောက်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်မည်သို့ကွာခြားသည်ကိုဖော်ပြထားသည်။ … အစားအစာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့လောင်းကစားဝိုင်းအပြုအမူတွေစွဲ၏ဤအသစ်သောအဓိပ်ပါယျမှာဖော်ပြထားတဲ့ '' ဆုလာဘ်၏ရောဂါဗေဒလိုက်စား '' နှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်.
သို့သော် 'စွဲလမ်းမှု' သည် APA ၏ DSM5 တွင်မပါဝင်ပါသလော။
အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း (ယား) ယခုအချိန်အထိသူ့ရဲ့အဖြေရှာတဲ့ကို manual ထဲမှာစွဲလမ်း / compulsive porn အသုံးပြုမှုအပါအဝင်အပေါ်ခွကေိုဆွဲငင်လျက်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်နောက်ဆုံး 2013 အတွက်လက်စွဲ updated လိုက်တဲ့အခါ (DSM-5)တရား ၀ င် "အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှု" ဟုတရားဝင်မသတ်မှတ်ခဲ့ပါ။ ၎င်းသည် "hypersexual disorder" ကိုငြင်းခုန်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ပြproblemနာရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်နောက်ဆုံးထီးဝေါဟာရကို၎င်းမှထည့်သွင်းရန်အကြံပြုခဲ့သည် DSM-5 ရဲ့ ပြန်လည်သုံးသပ်၏နှစ်ကြာလိင်လုပ်ငန်း Group မှပိုင်ဆိုင်တယ်။ သို့သော်တစ်ဦးဒသမနာရီ "ကြယ်ပွင့်အခန်းထဲက" session တစ်ခုအတွက် (ကသူ Work Group မှအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအရ), အခြား DSM-5 အရာရှိများတဖက်သတ် hypersexuality ပယ်ချ, ယုတ္တိမတန်အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ကြကြောင်းအကြောင်းပြချက်ကိုးကား.
ဒီအနေအထားကိုရောက်ရှိမှာ DSM-5 တရားဝင်အထောက်အထား, နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို, ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ခံစားနေရသူနှင့်၎င်းတို့၏ Clinician ထံမှမလှူခြင်းနှင့်စွဲလမ်းနှင့်ကိုက်ညီအပြုအမူတွေ၏ကျယ်ပြန့်သည့်အစီရင်ခံစာများနှင့်စွဲဆေးပညာ၏အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်သုတေသနကျွမ်းကျင်သူများကထောင်ပေါင်းများစွာ၏များ၏တရားဝင်ထောက်ခံချက်မှတ်။
စကားမစပ်, အ DSM တစ်ခုတည်းကိုသာရောဂါလက္ခဏာအတွက်၎င်း၏ diagnoses မြေမှနောက်ခံဇီဝြဖစ်စဉ်များနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသီအိုရီလျစ်လျူရှု၎င်း၏ချဉ်းကပ်ဖို့ကန့်ကွက်သူကိုပုံမှန်ဝေဖန်သူများကရရှိထားပြီးပါပြီ။ အဖြစ်မှန်ကိုအန်တုသောအဆုံးစွန်သောပါမစ်အပြောင်းအလဲမြန်, နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်များ။ ဥပမာ, DSM တခါမှားယွင်းစွာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါအဖြစ်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းခွဲခြား။
ရုံမတိုင်မီရန် DSM-5 ရဲ့ 2013, သောမတ်စ် Insel, စိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသား Institute ၏ထို့နောက်ဒါရိုက်တာအတွက်ထုတ်ဝေ က DSM အပေါ်မှီခိုရပ်တန့်ဖို့စိတ်ကျန်းမာရေးလယ်ကွင်းများအတွက်အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်သတိပေး။ ယင်း "အားနည်းခြင်းတရားဝင်မှု၏၎င်း၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်သူကရှင်းပြသည်။ အင်းဆဲလ်ကလည်း "အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ စံသတ်မှတ်ချက်အရရွှေစံချိန်” အနေဖြင့် DSM အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုပါကကျွန်ုပ်တို့အောင်မြင်မည်မဟုတ်ပါ။"သူကဆက်ပြောသည်"NIMH ကွာ DSM category ထံမှ၎င်း၏သုတေသန re-orienting ပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်s” ။ တနည်းအားဖြင့် NIMH သည် DSM တံဆိပ်များ (နှင့်သူတို့မရှိခြင်း) အပေါ် အခြေခံ၍ သုတေသနရန်ပုံငွေကိုရပ်ဆိုင်းလိမ့်မည်။
အဆိုပါ DSM-5 ရဲ့ထုတ်ဝေကတည်းက အင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားစွဲလေ့လာမှုများရာပေါင်းများစွာကပိုနှင့်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများအာရုံကြောလေ့လာမှုများများစွာထွက်လာကြပါပြီ။ သူတို့ဟာ DSM-5 ရဲ့အနေအထားကို undercut မှဆက်လက်။ စကားမစပ်အသစ်ဖန်တီး အမူအကျင့်စွဲအမျိုးအစား ထဲမှာပေါ်လာပါမည် အသစ်က DSM-5, ပါဝင်ဘို့ရာခန့်ထားသော "အင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါ" နဲ့။
စကားမစပ်၊ DSM-5 ၏ရပ်တည်ချက်ကိုမီဒီယာကအာရုံစိုက်ထားသော်လည်းပြproblemနာရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရှိသူများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောလေ့ကျင့်သူများသည်ထိုပြproblemsနာများကိုဆက်လက်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ သူတို့က DSM-5 မှာနောက်ထပ်ရောဂါတစ်ခုကိုသုံးထားတယ်။ အချို့သည်လက်ရှိ ICD-10 မှအခြားတစ်ခုကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောရောဂါရှာဖွေရေးလက်စွဲဖြစ်သည် ရောဂါ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေး။ ထွက်ထောက်ပြအဖြစ် ဒီ 2016 ဂျာနယ်ဆောင်းပါး ဒေါက်တာရစ်ချတ် Krueger by:
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ compulsive ရည်ညွှန်းနိုင် Diagnoses နှစ်ပေါင်းများအတွက် DSM နှင့် ICD တွင်ထည့်သွင်းထားသည်နှင့်ယခုနှစ်ဦးစလုံး DSM-5 သုံးပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တရားဝင်ရောဂါခြင်းကိုနှင့်မကြာသေးမီက ICD-10 အဖြေရှာတဲ့နိုင်တဲ့ coding ပြဌာန်းပေးနိုင်သည်။ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ ICD-11 ဘို့စဉ်းစားလျက်ရှိသည်။
Krueger သည်ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်၏ဆေးသမားနှင့်ခွဲစိတ်ဆရာ ၀ န်များ၏စိတ်ရောဂါကုသမှုဆိုင်ရာပါမောက္ခဖြစ်သည်။ သူသည် DSM-5 ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများအပိုင်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ကူညီခဲ့သည်။
သို့သော်ကြီးမားသောသတင်းအတွက် 2018 ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့လက်ယားရဲ့အလွန်အကျွံသတိသတ်မှတ်ထားသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေရေးလက်စွဲစာအုပ် ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11), သစ်တစ်ခုရောဂါပါရှိသည် porn စွဲများအတွက်သင့်လျော်သော: "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder။ "
ထို အဘယ်သူသည် "Pseudoscience ကြွေးကြော်"အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲစွဲလမ်းမှုသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုဖော်ပြရာတွင်နိုင်ငံရေးအစီအစဉ်ရှိသည်သို့မဟုတ်မကြာသေးမီကမသိရှိရသေးပါ စွဲ neuroscience အတွက်တိုးတက်လာ။ ဤသည်မှာစွဲလမ်းမှုနှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်နေရာတွင်ကောင်းမွန်သောသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ဂျာနယ်ဆောင်းပါးဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းစွဲ - neuroplasticity (2013) ၏အခြေအနေတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ့် supranormal လှုံ့ဆော်မှု။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်န ၀ ါရီလတွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာသည့်ဤ“ စတင်သည့်ဆောင်းပါး” မှစ၍ ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများနှင့် ပတ်သက်၍ ဦး နှောက်လေ့လာမှုများစွာကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
Hypersexual Disorder (2017) နှင့်အတူအမျိုးသားများအတွက် HPA ဝင်ရိုးတန်း Related Gene ၏ methylation
Hypersexual Disorder (အမျိုးသားများရှိ Plasma Oxytocin Levels) (၂၀၂၀)
ပုံမှန် Testosterone ဟော်မုန်းနှင့်မြင့်မားသော Luteinizing Hormone Plasma Levels (ယောက်ျားများတွင် Hypersexual Disorder) (2020)
တားဆီးထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ပြproblemနာရှိသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်း - အင်ဆူလာ၏အရေးပါသောဟန်ချက်ညီမှုအခန်းကဏ္ ((၂၀၂၀)
ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှု (၂၀၂၀) တွင်အမျိုးသားများအကြားအမူအကျင့်ဆိုင်ရာတားစီးထိန်းချုပ်မှုအားနည်းသော ၂ ခုရွေးချယ်သည့် oddball လုပ်ငန်းတာဝန်ရှိသည့်အဖြစ်အပျက်များ
အဖြူရောင်ဒြပ်ထုဆိုင်ရာနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလိင်အပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ - Diffusion Tensor Imaging လေ့လာမှု
အထက်ပါလေ့လာမှုများ 2011 အတွက် YBOP အားဖြင့်န့ ်. ယူဆချက်များအတွက်အလွန်အားကောင်းတဲ့ထောက်ခံမှုပေး။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များပါဝင်သည်:
လိင်မှုဆိုင်ရာပုံရိပ်များကိုခေတ္တကြည့်ရှုစဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုသည်ဆုလာဘ်နည်းသော circuit activation နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။
လေ့လာမှုတစ်ခုအရညစ်ညမ်းသောစွဲစွဲနေသောအကြောင်းအရာများ၏ ၆၀% သည် ED နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမိတ်ဖက်များနှင့်တွေ့ခဲ့ရသော်လည်း၊ အားလုံးကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သူတို့၏ ED / libido နည်းစေကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
အလုပ်မဖြစ်သော HPA ဝင်ရိုးနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲများတွင်ဖြစ်ပေါ်သည့် ဦး နှောက်စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ နာတာရှည်လူမှုစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆက်စပ်သောသာ။ ကြီးမြတ် amygdala အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အတူတူပင်သက်ဆိုင်သည်။
ဂယ်ရီ Wilson ကက 2016 peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူ: ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဖော်ပြမှနာတာရှည်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုပပျောက် (2016)
ယင်းမှ neuroscience ၏လက်ရှိပြည်နယ်စုစည်းတင်ပြရန်:
နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ဦးနှောက်သုတေသန သီးခြား လတ်တလောအင်တာနက်စွဲလမ်းသူများအနေဖြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲသူများရောက်ရှိလာခြင်းသည်အလွန်နှေးကွေးသည်။ အထက်ပါညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအပေါ်အထက်ပါ ဦး နှောက်လေ့လာမှုများအပြင်ကျော် ဦး နှောက် ၃၈၀ အင်တာနက်စွဲလမ်းအပေါ်လေ့လာမှုများ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ကြခြင်း, အားလုံး မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းအခြေခံကျသော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်သုတေသနဘာသာရပ်စွဲနေကြောင်းလေ့လာမှုကမလေ့လာခဲ့ပါ။ သို့ရာတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုမြင့်မားစွာအသုံးပြုခြင်းသည်အစားအစာ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ လောင်းကစားများနှင့်စသည်ဖြင့် ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်ခြင်းမရှိဟုကောက်ချက်ချခြင်းသည်ယုတ္တိမရှိပေ။အင်တာနက်" ရှိနှင့်ပြီးသား အဲဒီလိုလုပ်ဖို့သက်သေပြခဲ့.
, ရောက်ရှိမည်နှေးကွေးတိုင်းတစ်ခုတည်းနေစဉ် neuroscience အခြေစိုက်လေ့လာမှုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသုံးစွဲသူများ (သို့) လိင်စွဲလမ်းသူများကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်ဟူသောအချက်ကိုထောက်ခံသည်။ ဒါကြောင့်မကြာသေးမီကစာပေရဲ့အာရုံကြောသိပ္ပံအခြေပြုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများပြုလုပ်ပါ။
တစ်ဦးရောဂါအဖြစ်လိင်စွဲ: အကဲဖြတ်ဘို့အထောက်အထား, Diagnosis နှင့်ဝေဖန်သူများမှတုံ့ပြန်မှု (2015)
ကောက်နှုတ်ချက်: မကြာသေးမီဆောင်းပါးတွေမှာတော့ဘာစွဲအင်တာနက်စွဲတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အမျိုးအစားစဉ်းစားသည်။ တချို့ကလက်ရှိလေ့လာမှုများကျဘာစွဲခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအင်တာနက်ကိုဂိမ်း Disorder ကဲ့သို့သောအခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုအကြားမျဉ်းပြိုင်စုံစမ်းစစ်ဆေး။ Cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာဘာစွဲနေတဲ့အဓိကကျသည့်အခန်းကဏ္ဍမှထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်။ Neuroimaging လေ့လာမှုများကျဘာစွဲနှင့်အခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းအဖြစ်ဥစ္စာမှီခိုအကြားအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဆင်တူရိုးမှား၏ယူဆချက်ကိုထောကျပံ့။
ကောက်နုတ်ချက်: "CSB နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းမှုကိုအကြားအချို့တူညီပေးထား, စှဲများအတွက်ထိရောက်သောဆောင်ရွက်ချက်အရှင်တိုက်ရိုက်ဒီဖြစ်နိုင်ခြေအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အနာဂတ်သုတေသနလမ်းညွန်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို CSB ဘို့ဂတိတော်ကိုကိုင်စေခြင်းငှါ။ "
တစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Compulsive သငျ့သလော (2016)
ကောက်နုတ်ချက်: "CSB နှင့်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုမမှန်မှုများအကြားထပ်တူလက္ခဏာများရှိသည်။ ဘုံ neurotransmitter စနစ်များသည် CSB နှင့်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ပြီးမကြာသေးမီက neuroimaging လေ့လာမှုများသည်တဏှာနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောတူညီမှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ အလားတူဆေးဝါးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးများကို CSB နှင့်ဆေးစွဲသူများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်နိုင်သည်။
တစ်အပြုအမူစွဲအဖြစ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: အဆိုပါအင်တာနက်သက်ရောက်မှုနှင့်အခြားကိစ္စများ (2016)
ကောက်နှုတ်ချက်: "ဤအပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းငှါအဖြစ်ကိုပိုမိုအလေးပေးအင်တာနက်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်လိုအပ်ပါသည်။"နှင့်"ကူညီခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောတစ်ဦးချင်းစီပြုမူဆက်ဆံသောသူတို့အထဲကနေလက်တွေ့အထောက်အထားစိတ်ရောဂါအသိုင်းအဝိုင်းများက သာ. ကြီးယုံကြည်လက်ခံရပါမည်။ "
ကောက်နုတ်ချက်: "အတူတူယူ, သက်သေအထောက်အထားများဆုလာဘ်ဖြစ်စဉ်ကိုတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, amygdala, hippocampus, hypothalamus, septum နှင့် ဦး နှောက်ဒေသများအတွက်အပြောင်းအလဲများ hypersexuality ၏ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ထင်ရှားတဲ့အခန်းကဏ္ that ကြောင်းဆိုလိုသည်ပုံရသည်။ မျိုးရိုးဗီဇလေ့လာမှုများနှင့် neuropharmacological ကုသမှုချဉ်းကပ် dopaminergic စနစ်၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုမှာညွှန်ပြ။ "
ကောက်နှုတ်ချက်: မကြာသေးမီကဆောင်းပါးများတွင်ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှုကိုအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအမျိုးအစားတစ်ခုဟုသတ်မှတ်ထားသည်။ Sလက်ရှိလေ့လာမှုများအရဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှုနှင့်အင်တာနက်အပြုအမှုဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုကဲ့သို့သောအခြားအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများအကြားပြိုင်ဆိုင်မှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ cue-reactivity နှင့်တဏှာသည် cybersex စွဲလမ်းမှုတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ to မှပါဝင်သည်။ Neuroimaging လေ့လာမှုများသည် cybersex စွဲလမ်းမှုနှင့်အခြားသောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအရာ ၀ တ္ထုမှီခိုမှုအကြားအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောတူညီသည့်အရာများ၏ယူဆချက်ကိုထောက်ခံသည်။ ”
ရွှံ့ရေထဲမှာရှင်းလင်းပြတ်သားရှာဖွေခြင်း: တစ်ခုစွဲ (2016) အဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူခွဲခြားများအတွက်အနာဂတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား
ကောက်နှုတ်ချက်: We မကြာသေးမီက non-ပစ္စည်းဥစ္စာ (အပြုအမူ) စွဲလမ်းအဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) ခွဲခြားဘို့သက်သေအထောက်အထားဆင်ခြင်၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့ရှိခဲ့ CSB ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်အတူလက်တွေ့ neurobiological နှင့်ဖြစ်စဉ်မျဉ်းပြိုင် shared ။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံး DSM-5 ထံမှ hypersexual ရောဂါပယ်ချခဲ့ပေမယ့်, CSB (အလွန်အကျွံလိင် drive ကို) ၏ရောဂါ ICD-10 သုံးပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ CSB လည်း ICD-11 နေဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်ရှိသည်။
ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စာပေများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ US ရေတပ်ဆရာဝန်များနှင့်ပါ ၀ င်သော၊ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသည်လူငယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများမြင့်တက်လာကြောင်းဖော်ပြသည့်နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုမှတစ်ဆင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုများကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖော်ထုတ်သောအမျိုးသားများနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆေးမှတ်တမ်း ၃ ခုသည်ဆရာဝန်များကဖော်ပြသည်။
တိကျတဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမမှန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်. ပေါင်းစပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neurobiological ထည့်သွင်းစဉ်းစား: ပုဂ္ဂိုလ်-အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု-သိမှတ်ခံစားမှု-execution model (2016) ၏တစ်ဦး Interaction
“ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာကြည့်ရှုခြင်းရောဂါ” အပါအ ၀ င်တိကျသောအင်တာနက်သုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအခြေခံယန္တရားများကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ စာရေးသူများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲခြင်း (နှင့် cybersex စွဲလမ်းမှု) ကိုအင်တာနက်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာပြdisနာများအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးအခြားအမူအကျင့်စွဲခြင်းများကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါများအောက်တွင်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
ကောက်နုတ်ချက်: ကျနော်တို့ကသဘာဝသို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်ကိုစွဲအပါအဝင်စွဲများအတွက် neurobiological အခြေခံ, ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်, ပြီးတော့ဒီတစ်ဦးချင်းရဲ့ဘဝအတွက် function "စီမံထားခြင်းမရှိသော" ဖွစျလာနိုငျတဲ့သဘာဝအဆုလာဘ်အဖြစ်လိင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိနားလည်မှုတို့နဲ့ဆက်စပ်ပုံကိုဆွေးနွေးပါ။
ကောက်နုတ်ချက်: လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်း neuroscientific ချဉ်းကပ်မှု၊ အထူးသဖြင့်အလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) နှင့်လေ့လာမှုများစွာကိုစမ်းသပ်အခြေအနေများအောက်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ခြင်းကိုကြည့်ရှုခြင်း၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ယခင်ရလဒ်များအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုသည်အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသုံးစွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိပြီးဖြစ်သောဓာတုဗေဒနှင့်ဆက်စပ်သောစွဲလမ်းမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အခြေခံသည့် neurobiological ယန္တရားများနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
ကောက်နှုတ်ချက်: အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ၏ neurobiology သို့သုတေသနအာရုံကိုဘက်လိုက်မှု, မက်လုံးပေး salience အရည်အသွေးများနှင့်စှဲနှင့်အတူများပြားလှသောတူညီအကြံပြုကြောင်းဦးနှောက်-based cue reactivity ကိုပတ်သက်တွေ့ရှိချက်ထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်. ကျနော်တို့သုတေသီများတစ်ခုစွဲလမ်းရောဂါအဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါခွဲခြားမကြာသေးမီဒေတာတွေနဲ့ကိုက်ညီသည်နှင့် Clinician အတှကျအကြိုးရှိစေခြင်းငှါယုံကြည်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်ခံစားခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဒီရောဂါကြောင့်ထိခိုက်။
ကောက်နှုတ်ချက်: CSB နှင့်စွဲလမ်းမမှန်အကြားတူညီအကြံပြုစေခြင်းငှါ၎င်း domains များအကြားဝေါ်လ်တန် et al အားဖြင့်ချန်လှပ်အများအပြားမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများနှင့်အတူလေ့လာမှုများ, neuroimaging နေကြသည်။ (2017) ။ ကန ဦး လေ့လာမှုများသည်ဆေးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ CSB ကိုမကြာခဏဆန်းစစ်လေ့ရှိသည် (Gola, Wordecha, Marchewka, & Sescousse တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်) 2016b; Kraus, Voon & Potenza, 2016b).
အဆိုပါ ICD-11 (ထဲမှာ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ: ပညာရေးဆိုင်ရာ, ခွဲခြား, ကုသမှုနှင့်အပေါ်မူဝါဒရေးရာချမှတ် Commentary မြှင့်တင်Kraus et al။ , 2018)
ကောက်နှုတ်ချက်: အခြားမော်ဒယ်များအဆိုပြုထားပြီအဖြစ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ် CSB ရောဂါခွဲခြားလက်ရှိအဆိုပြုလွှာ (အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်Kor, Fogel, Reid, & Potenza, 2013) ။ ကြောင်း CSB ရှယ်ယာစှဲနှင့်အတူအများအပြား features တွေအကြံပြုခြင်းဒေတာ (ရှိပါတယ်Kraus et al ။ , 2016), ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုနဲ့ဆက်စပ်တွေကိုတုန့်ပြန်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဒေသများတိုးမြှင့် reactivity ကိုညွှန်ပြမကြာသေးမီဒေတာအပါအဝင် (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Snagowski, Laier, & Maderwald, 2016; Gola, Wordecha, Marchewka, & Sescousse, 2016; Gola et al ။ , 2017; Klucken, Wehrum-Osinsky, Schweckendiek, Kruse, & Stark, 2016; Voon et al ။ , 2014 ။
ကောက်နှုတ်ချက်: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) ကျယ်ပြန့် ", အမူအကျင့်စွဲ" ဟုအဖြစ်မှတ်ခြင်းနှင့်အသက်တာ၏အရည်အသွေးနှင့်နှစ်ဦးစလုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုအဓိကခြိမ်းခြောက်မှုပင်ဖြစ်ပါသည်။ နိဂုံးချုပ်မှာတော့ဒီသုံးသပ်ချက်အမူအကျင့်များနှင့် neuroimaging လူ့ CSB အပေါ်လေ့လာမှုများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအပါအဝင်အခြားရောဂါများနှင့်အတူ comorbidity အကျဉ်းချုံး။ အတူတကွဤလေ့လာမှုများ CSB အပြင် amygdala နှင့် prefrontal cortex အကြားဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားရန်, dorsal anterior cingulate နှင့် prefrontal cortex, amygdala, striatum နှင့် thalamus အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ပွောငျးလဲနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
ကောက်နုတ်ချက်: ယနေ့အထိလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာ neuroimaging ဆိုင်ရာသုတေသနအများစုသည်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်မဟုတ်သောစွဲလမ်းမှုများကိုအခြေခံသောထပ်တူကျသောယန္တရားများကိုသက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။ compulsive လိင်အပြုအမူသည်အာရုံခံခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခြင်း၊ impulse dyscontrol နှင့်အရာဝတ္ထု၊ လောင်းကစားနှင့်ဂိမ်းစွဲလမ်းမှုပုံစံများတွင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောအပြောင်းအလဲများနှင့်ပတ်သက်သော ဦး နှောက်ဒေသများနှင့်ကွန်ယက်များတွင်ပြောင်းလဲသောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည်။ CSB အင်္ဂါရပ်များနှင့်ဆက်စပ်သောအဓိက ဦး နှောက်ဒေသများသည်နျူကလိယ accumbens အပါအဝင်တိုကျရိုကျနှငျ့ယာယီ cortices, amygdala နှင့် striatum တို့ပါဝင်သည်။
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုများ၏အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ၏တစ်ဦးကလက်ရှိနားလည်မှု
ကောက်နုတ်ချက်: မကြာမီက neurobiological လေ့လာမှုများ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေပြောင်းလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုအတွက်ကွဲပြားမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ဟုထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါသည်။ CSBD ၏အနည်းငယ် neurobiological လေ့လာမှုများယနေ့အထိကျင်းပပြီးစီးခဲ့ကြပေမဲ့လည်းလက်ရှိဒေတာထိုကဲ့သို့သောဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းမမှန်ကဲ့သို့သောအခြားဖြည့်စွက်အတူ neurobiological မူမမှန်ရှယ်ယာ Community အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိဒေတာသည်၎င်း၏ခွဲခြားတဲ့အမူအကျင့်စွဲထက်တစ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်ပိုကောင်းတော်ပါတယ်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ကောက်နုတ်ချက်: လက်ရှိရရှိနိုင်လေ့လာမှုများတွေထဲမှာကျနော်တို့ကိုးစာပမြေား (ဇယားကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့တယ် 1) အရာအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်အသုံးပြုသွားမည်။ ဤအရာလေး (သာ36-39) တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆောင်သွားတွေကိုနှင့် / သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်ရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ventral striatum Active နှင့်ဆက်စပ်သောတွေ့ရှိချက်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ သုံးလေ့လာမှုများ (ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်တိုးမြှင့ ventral striatal reactivity ကိုညွှန်ပြ36-39) သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောလှုံ့ဆော်မှုခန့်မှန်းတွေကို (36-39) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ယ့ Salience သီအိုရီ (IST) (နှင့်ကိုက်ညီများမှာ28), စွဲလမ်းအတွက်ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာဖော်ပြအထင်ရှားဆုံးမူဘောင်တွေထဲက။
ကောက်နုတ်ချက်: အဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ်မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုအတော်များများထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် psychosexual မကျေနပ်မှုအဖြစ်အရေးကြီးသောလက်တွေ့သရုပ်နဲ့စွဲအတိုင်းဤ entity ထောက်ခံပါတယ်။ လက်ရှိအလုပ်အများစုမှာဆက်လက်စားသုံးမှုမှတဆင့်အနေနဲ့စွဲလမ်းရောဂါဖြစ်နိုင်ဟုနိုငျကွောငျး, တစ်ကယ့်ပစ္စည်းဥစ္စာကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့နေတဲ့ '' supranormal နှိုးဆွ '' အဖြစ်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းများ၏အယူအဆပေါ်တွင်အခြေခံပစ္စည်းဥစ္စာစွဲပေါ်တွင်ပြုသောအမှုအလားတူသုတေသနအပေါ်ချွတ်အခြေခံသည်။
အွန်လိုင်း porn စွဲ၏ဖြစ်ပျက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး: လွယ်ကူစွာထိခိုက်အချက်များ, ခိုင်ခံ့စေယန္တရားများနှင့်အာရုံကြောယန္တရားများ (2019) တစ်ဦးချင်းစီ
ကောက်နုတ်ချက်: အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ရေရှည်အတွေ့အကြုံသည်ထိုသို့သောသူများအားအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သဲလွန်စများအထိသိမြင်စေခြင်းကြောင့်သွေးဆောင်မှုနှင့်လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုနှစ်ခုလုံးအောက်တွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစွဲမက်ခြင်း၊ ၎င်းမှရရှိသောကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုသည်အားနည်းလာသည်နှင့်အမျှယခင်စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်စွဲလမ်းစေရန်အတွက်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများပိုမိုလိုအပ်လာသည်။
သီအိုရီ, ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါ (2019) ၏ကုသမှု
ကောက်နုတ်ချက်: ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပါအဝင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါအဖြစ် ICD-11 တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ဒီရောဂါများအတွက်အဖြေရှာတဲ့စံ, သို့သော်, စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကြောင့်ပုံမမှန်များအတွက်စံရန်အလွန်ဆင်တူ ... သီအိုရီထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားစွဲလမ်းမမှန်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neurobiological ယန္တရားများညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါအတွက်လည်းတရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
Cybersex စွဲ - အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာသောရောဂါအသစ်တစ်ခု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ကုသမှုခြုံငုံသုံးသပ်ချက် (၂၀၂၀)
ကောက်နုတ်ချက်များ: Cybersex စွဲသည်အင်တာနက်မဟုတ်သောအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများပါဝင်သောပစ္စည်းမဟုတ်သောစွဲလမ်းမှုဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်လိင်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာအမျိုးမျိုးကိုအင်တာနက်မီဒီယာများမှအလွယ်တကူရနိုင်သည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင်လိင်မှုကိစ္စကိုပုံမှန်အားဖြင့်တားမြစ်သည်ဟုယူဆကြသော်လည်းလူငယ်အများစုသည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းခံကြရသည်။ ၎င်းသည်သုံးစွဲသူများအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ဆက်နွယ်မှု၊ ငွေ၊ အဓိကစိတ်ကျဝေဒနာနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါများစသည့်စွဲလမ်းစေနိုင်သည်။
မည်သည့်အခြေအနေများကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောဂါများအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း (ICD-11) တွင်“ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများကြောင့်အခြားသတ်မှတ်ထားသောရောဂါများ” ဟုသတ်မှတ်သင့်သနည်း။ (၂၀၂၀)
ကောက်နှုတ်ချက်: Self-report၊ အမူအကျင့်၊ electrophysiological နှင့် neuroimaging လေ့လာမှုများမှအချက်အလက်များသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်လောင်းကစား / ဂိမ်းကစားခြင်းဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်အမျိုးမျိုးသောအတိုင်းအတာအထိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ တည်ဆောက်ထားသည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များနှင့်နောက်ခံအာရုံကြောဆက်စပ်မှုများပါဝင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ကြိုတင်လေ့လာမှုများတွင်မှတ်သားထားသောအဖြစ်အပျက်များတွင် cue-reactivity နှင့်တလိုတလားရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများပါဝင်သော ဦး နှောက်areasရိယာများ၊ အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုများ၊
လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ပြOnlineနာရှိသောအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေသုံးစွဲမှု၏စွဲလမ်းစေသောသဘောသဘာဝ - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (၂၀၂၀)
ကောက်နှုတ်ချက်: ရရှိနိုင်သည့်တွေ့ရှိချက်များအရ CSBD နှင့် POPU ၏လက္ခဏာများသည်စွဲလမ်းမှု၏လက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီပြီးအမူအကျင့်နှင့်ပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုများကိုပစ်မှတ်ထားရာတွင်အထောက်အကူပြုသောကြား ၀ င်မှုများသည်လိုက်လျောညီထွေမှုနှင့် CSBD နှင့် POPU နှင့်တစ် ဦး ချင်းကိုထောက်ပံ့ရာတွင်အသုံးပြုရန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ POPU နှင့် CSBD ၏ neurobiology တွင်တည်ရှိပြီးသောဓာတုပစ္စည်းအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများ၊ အလားတူ neuropsychological ယန္တရားများနှင့် dopamine ဆုလာဘ်စနစ်တွင်ဘုံအာရုံကြောနှင့်ဆိုင်သောပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူမျှဝေထားသော neuroanatomical ဆက်စပ်မှုများစွာပါဝင်သည်။
အလုပ်မဖြစ်သောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ - အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ လက်တွေ့အခြေအနေများ၊ neurobiological profile များနှင့်ကုသမှုများ (၂၀၂၀)
ကောက်နှုတ်ချက်: လိင်စွဲလမ်းမှုမှ neurobiologically ကွဲပြားသော်လည်းအကျင့်စွဲစွဲလမ်းမှုပုံစံသည်နေဆဲဖြစ်သည်။ porn စွဲလမ်းမှုကိုရုတ်တရက်ရပ်ဆိုင်းခြင်းသည်စိတ်ဓာတ်၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လိင်နှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ရောဂါနှင့်ဆက်ဆံရေးအခက်အခဲများ ...
ကောက်နှုတ်ချက်: CSBD ကိုတွန်းအားပေးထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ …နောက်ထပ်သုတေသနသည် DSM-5 နှင့် ICD-11 ရှိအရာ ၀ တ္ထုမဟုတ်သောသို့မဟုတ်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများအထိလောင်းကစားခြင်းရောဂါနှင့်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ခြင်း၊ အချို့သောသူများအဆိုပြုထားသည့်အတိုင်း ... စိတ်မရှည်သောအရာသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းကိုအကြီးအကျယ်အထောက်အကူမပြုနိုင်ပါ။နှစ်ဦးစလုံး et al ။ , 2019).
လောင်းကစားဆိုင်ရာရောဂါ၊ ပြသနာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အရက်သောက်ခြင်းရောဂါတို့တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း - တူညီမှုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုများ (၂၀၂၁)
ကောက်နှုတ်ချက်: CSBD နှင့်စွဲလမ်းမှုအကြားတူညီမှုကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးဆိုးဝါးသောအကျိုးဆက်များရှိသည့်တိုင်အောင်ထိန်းချုပ်မှု၊ ဆက်လက်သုံးစွဲမှုအားနည်းခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်များတွင်ပါ ၀ င်လိုသောဆန္ဒများကိုမျှဝေခြင်းများဖြစ်နိုင်သည် (37••, 40) ။ ဤရောဂါများရှိသူများသည်မကြာခဏညံ့ဖျင်းသောသိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုနှင့်အားနည်းချက်ရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများကိုပြသကြသည်။12, 15,16,17] ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သည့်သင်ကြားမှုဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်များသည်ရောဂါများစွာတွင်တွေ့ရသည်။
ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ - စမ်းသပ်လေ့လာမှုများကိုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (၂၀၂၁)
ကောက်နှုတ်ချက်: လက်ရှိစာတမ်းတွင် PPU ၏အခြေခံသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ၂၁ ခုမှရရှိသောအထောက်အထားများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ဆန်းစစ်။ ပြုစုသည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် PPU သည် (က) လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုကိုဂရုပြုခြင်း၊ (ခ) ချို့တဲ့သောတားစီးထိန်းချုပ်မှု (အထူးသဖြင့်မော်တာတုံ့ပြန်မှုတားစီးခြင်းနှင့်ပြproblemsနာများမှအာရုံစိုက်မှုကိုဆီလျော်မှုမရှိခြင်း)၊ အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ()) ဆုံးဖြတ်ချက်ချချို့ယွင်း။
တိရစ္ဆာန်များနှင့်လူသားနိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပြသည့်အခါအကြောင်း, အပြုအမူနှင့်ရောဂါလက္ခဏာ တစ်ခုစွဲ၏, သက်ဆိုင်ရာဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုလည်းပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်။
စွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများ (အပြုအမူနှင့်ဓာတုဗေဒနှစ်မျိုးလုံး) သည်အစပျိုးသည် DeltaFosB ၏စုဆောင်းခြင်း.
ဒါကအားလုံး ဦးနှောက်သုတေသန အရှင်ဝေးပြု အင်တာနက်စွဲ (porn အသုံးပြုမှုပါဝင်သောအချို့) မူးယစ်ဆေးစွဲတွင်တွေ့မြင်အဖြစ်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို၏တူညီသောမျိုးဖော်ပြသည်။
လေ့လာမှုများရှိသည်သောအင်တာနက်စွဲခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု သရုပ်ပြ causation အမျိုးမျိုးသောရောဂါလက္ခဏာနှင့်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ။
ICD-11 အဖြစ်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုများအတွက်လုံလောက်သောပင်ကိုယ်မူလထောက်ခံမှုရှိပါတယ် သစ်တစ်ခုရောဂါပါရှိသည် porn နှင့်လိင်စွဲလမ်းနှစ်ဦးစလုံးအတွက်သင့်တော်: "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder။ "
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ 110 လေ့လာမှုများကျော် ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်လိင်စွဲခြင်းနှင့်လိင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၊ နှိုးဆွမှုနည်းခြင်းနှင့်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုကျေနပ်အားရမှုတို့အကြားဆက်နွယ်မှုများကိုတင်ပြခဲ့သည်။ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 60 လေ့လာမှုများကျော် (စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ။ နှင့် လေ့လာမှု ၉၀ ကျော်သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ပိုမိုညံ့ဖျင်းသောသိမြင်မှုရလဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်.
ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုမှားယွင်းစေသောလေ့လာမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ (“ ညစ်ညမ်းသောစစ်ပွဲများ”)
အဘယ်သူမျှမရှိတယ်, အယ်ဒီတာမှဤ "စာတစ်စောင်အပါအဝငျ"တစ်ခုပညာရေးဂျာနယ်ထဲမှာ။ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုလှည့်စားသည်ဟုဆိုသောလေ့လာမှုများကိုဖော်ပြသည့်ဆောင်းပါးများကိုသင်ဖတ်ကောင်းဖတ်မိလိမ့်မည်။ ခေါင်းစဉ်ကိုအတိတ်ကိုကြည့်ပြီးဒီစာတမ်းသုံးခုထဲကတစ်ခုနှင့်အစီအစဉ်အပေါ်အခြေခံတဲ့ PhDs နှစ်ခုကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်လို့အာမခံပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire မဟုတ်ဘဲ Hypersexuality, လိင်ပုံများအားဖြင့်ရူးနှမ်း Neurophysiological တုံ့ပြန်ချက်မှ Related ဖြစ်ပါတယ် (2013)
ပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့် "Porn စွဲ" နဲ့တသမတ်တည်းရှိမနေသောထိန်းချုပ်မှုများအတွက်လိင်ပုံများအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းအပြုသဘောဆောင်သောအလားအလာ Modulation (2015)
ဧကရာဇ်အဘယ်သူမျှမအဝတ်အစားရှိထား: အ '' ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ '' Model ရဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2014)
နီကိုးလ် Prause လေ့လာမှုများ ၁ နှင့် ၂ တွင် ဦး ဆောင်ရေးသားသူဖြစ်ပြီးစက္ကူ ၃ တွင်ဒုတိယရေးသားသူဖြစ်သည်။ စာရေးသူ၏ပြောဆိုချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်။ လေ့လာမှုတစ်ခုနှင့်နှစ်ခုသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုပုံစံကိုအမှန်တကယ်အထောက်အကူပြုသည်။ ဤစာမျက်နှာကို လေ့လာမှု #1 ခြောက် peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှုနှင့်အတူ YBOP ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါရှိသည်။ ဤစာမျက်နှာကို လေ့လာမှု # ၂ ကိုသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ၇ ခုနှင့်အတူ YBOP ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပါ ၀ င်သည်။ သက်တူရွယ်တူ - ပြန်လည်သုံးသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအားလုံး YBOP ဝေဖန်မှုများနှင့်အတူသဘောတူ၌ရှိကြ၏။ ဒီ2ခုနှစ်တင်ဆက်မှုမှာဂယ်ရီ Wilson ကမေးခွန်းထုတ်စရာနှင့်အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာမှုများ 2018 နောက်ကွယ်မှအမှန်တရားဖော်ထုတ်။ ၎င်းတို့တွင်နီကိုးလ် Prause EEG လေ့လာမှုနှစ်ခုပါဝင်သည် (သံမဏိ et al ။, 2013 နှင့် Prause et al ။, 2015) porn သုတေသန: အဖြစ်မှန်သို့မဟုတ်ထူးအိမ်သင်?
ဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ? နီကိုးလ်ပရပ်စ်သည်ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည် ရှည်လျားသောသမိုင်း အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကနေပျက်ဆီးအထောက်အထားအစီရင်ခံရန်ဝံ့တဲ့သူစာရေးဆရာ, သုတေသီများ, ကုသ, သတင်းထောက်များကိုနှင့်အခြားသူများနှောင့်ယှက်၏။ သူမသည်ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူအတော်လေးအဆင်ပြေနေ, ဒီထဲကနေမြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့အစည်း (XRCO) ဆုအခမ်းအနား၏အနီရောင်ကော်ဇောပေါ်သူမ၏၏ပုံရိပ် (ညာဘက်အစွန်ဆုံး)။ (ဝီကီပီးဒီးယားအဆိုအရ၊အဆိုပါ XRCO ဆုပေးပွဲ အမေရိကန်ကပေးတဲ့နေကြတယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်လူများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆုစက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်သီးသန့် reserved ပြသတစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ပါတယ်။") ။
ဒါဟာအစ Prause ရှိစေခြင်းငှါပုံပေါ် ဘာသာရပ်များအဖြစ်ရရှိသော porn အဆိုတော် အခြားညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားအုပ်စုတစ်စုကတဆင့်, အ အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း (အသေးစိတ်မြင်ဘို့: နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း) ။ FSC မှရရှိသောဘာသာရပ်များကိုသူမတွင်အသုံးပြုခဲ့သည် ငှားရမ်း - သေနတ်လေ့လာမှု ထိုအပေါ် အကြီးအကျယ်စှနျး နှင့် အလွန်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်သော“ Orgasmic Meditation” အစီအစဉ် (ယခုဖြစ်ခြင်း FBI ကစုံစမ်းစစ်ဆေး).
Los Angeles ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်ထိရောက်သောအာရုံကြောသိပ္ပံ (Span) ဓာတ်ခွဲခန်းမှအဓိကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူဒေါက်တာ Nicole Prause ကသူ့ကိုယ်သူ“ပရော်ဖက်ရှင်နယ် debunkerလိင်စွဲ၏ "။
အောက်တိုဘာလ, 2015 အတွက် Prause ရဲ့မူလတွစ်တာအကောင့်ကိုအပြီးတိုင်နှောင့်ယှက်ဘို့ဆိုင်းငံ့ထား။ ဒါကသူမကိုနှေးကွေးစေခဲ့ပါဘူး။ In ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဗြောင်ကျကျထောက်ခံမှု, ထို့နောက် Prause သည်အနည်းဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်နှစ်ခုကို twitter အကောင့်များပြုလုပ်ခဲ့သည် - (၁) ၂၀၁၆ - PornHelps " ၎င်းတွင်ကိုယ်ပိုင်တွစ်တာအကောင့် (@pornhelps)၊ (၂)2- RealYBOP တွစ်တာ နှင့် RealYBOP ဝက်ဘ်ဆိုက်.
Prause မှအကျိုးသူမ၏န်ဆောင်မှုများရောင်းချလျက်ရှိသည်သော်လည်းကြောင့်ဖြစ်ပုံရသည် ပြောဆိုထားသည် သူမ၏နှစ်ခု EEG လေ့လာမှုများ၏ဆန့်ကျင်ညစ်ညမ်းစွဲကောက်ချက် (1, 2), မြောက်မြားစွာ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှုနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများကို (စွဲမော်ဒယ်ကိုထောကျပံ့ပြောပါသော်လည်းသံမဏိ et al။ , 2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prause et al။ , 2015: 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10။ ) ။
တတိယစာတမ်း (Ley et al ။, 2014) ဒါကလေ့လာမှုမဟုတ်ဘူး။ ၎င်းအစား၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းသောဆိုးကျိုးများအပေါ်“ စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း” ဖြစ်သည်ဟုဆိုထားသည်။ အဘယ်အရာကိုမျှအမှန်တရားကနေဝေးကွာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဦး ဆောင်စာရေးသူ David Ley သည်စာရေးသူဖြစ်သည် လိင်စွဲလမ်း၏သွန်သင်ချက်အမှား။ နီကိုးလ်ပရပ်စ်သည်ဒုတိယစာရေးသူဖြစ်သည်။ Ley & Prause သည်စက္ကူနံပါတ် (၃) ကိုရေးရန်သာမကအဖွဲ့တစ်ခုကိုလည်းရေးခဲ့သည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် စက္ကူနံပါတ် ၁ အကြောင်းဘလော့ဂ်ပို့စ်။ The ဘလော့ဂ်ပို့စ်5လပေါ်လာသည် ရှေ့မှာ Prause ၏စက္ကူကိုတရားဝင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Ley ၏ blog post ကို oh-soy catchy ခေါင်းစဉ်ဖြင့်မြင်ဖူးပေလိမ့်မည် -Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် - ဒါဟာစှဲမယ့်။ " Ley နှင့် Prause နှင့်သူတို့၏ပူးပေါင်းမှုများအကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါ ဒီမှာ.
အောက်ဖော်ပြပါသည် Ley & Prause ၏“ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း” တွင်ပါ ၀ င်သည့် shenanigans များအားလုံးကိုဖော်ပြသည့်စက္ကူ ၃ ၏ရှည်လျားသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြစ်သည်။ တစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အမျှတစ်ဦးကအရိုးကျိုးရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင် pose: အဆိုပါဧကရာဇ်အဘယ်သူမျှမအဝတ်အစားရှိထားသည်။ ၎င်းသည်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုလုံးဝကိုဖျက်သိမ်းပြီးသူတို့ရည်ညွှန်းထားသည့်သုတေသန၏မှားယွင်းစွာတင်ပြမှုများစွာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ Ley ပြန်လည်သုံးသပ်မှု၏အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသောရှုထောင့်ကညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖော်ပြသောမည်သည့်လေ့လာမှုကိုမဆိုချန်လှပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်၊ ဟုတ်တယ်၊
"ရည်မှန်းချက်" ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ရေးသားရန်ရည်ရွယ်သော်လည်းဤလိင်ပညာရှင်နှစ် ဦး သည်ရာနှင့်ချီသောလေ့လာမှုများကိုချန်လှပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့အားဆက်စပ်မှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများဖြစ်သည့်အတွက်စွန့်ခွာခဲ့သည်။ ဘာလို့ထင်လဲ? porn နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုအားလုံးနီးပါးဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ ဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများသာရှိပြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ သုတေသီများသည်ဆိုးကျိုးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ရန်အတွက်“ အပျိုစင်အပျိုစင်များ” ကိုရှာဖွေရန် (သို့) အကြောင်းအရာများကိုညစ်ညမ်းသောအကြောင်းအရာများကိုအချိန်ကြာကြာမထားရန်နည်းလမ်းမရှိကြပါ။ ထောင်နှင့်ချီသောယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖြတ်ပစ်ကြသည် ဆန္ဒအလျောက် အမျိုးမျိုးသောဖိုရမ်များပေါ်တွင်သို့သော်။ သူတို့၏ရလဒ်များအရအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်သူတို့၏ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုများတွင်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။
အကျိုးအမြတ်များသောပconflictsိပက္ခများ (xHamster နှင့်ပူးပေါင်းခြင်းအပါအ ၀ င်)
ဒေးဗစ်လီသည်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုငြင်းပယ်သည်။ သူသည်ညစ်ညမ်းသောပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖိုရမ်များကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့် ED ထုတ်ပယ်ခြင်းများကို blog post ၃၀ ခန့်ရေးသားခဲ့သည်။ ငွေရေးကြေးရေးအရအကျိုးစီးပွားပconflictိပက္ခဖြစ်နေချိန်မှာဒေးဗစ်လဲ့ကပဲ porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးက X-ဟမ်းစတားများကလျော်ကြေးငွေခံရ ၎င်းတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုကြော်ငြာရန်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္sာရီဖြစ်သည်ဟုသုံးစွဲသူများကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်။ အထူးသဖြင့် David Ley နှင့်အသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည် လိင်ကျန်းမာရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ (SHA) ရှိ တစ်ဦးက X-ဟမ်းစတားက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူပူးပေါင်း (မြှောင်-Chat ကို) ။ မြင် "Stripchat သင့်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန် porn-ဗဟိုပြုဦးနှောက်လေဖြတ်ဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမဟာမိတ်တွေနဲ့ aligns":
porn စက်မှုလုပ်ငန်းအတိုင်ပင်ခံ Paid
တည်ထောင်ထားသောလိင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမဟာမိတ်အဖွဲ့ (SHA) အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့်အခြားနှစ်ဦးကိုလည်းပါဝင်သည် RealYourBrainOnPorn.com "ကျွမ်းကျင်သူများက" (Justin Lehmiller & Chris Donahue) ။ RealYBOP သည်အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်သည် ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးလိုလားသူ pornကဦးဆောင်, Self-ဟစျကျွောကွ "ကျွမ်းကျင်သူများက" နီကိုးလ် Prause။ ဤအုပ်စုလက်ရှိတွင်ပါဝင်နေသည် တရားမဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုနှင့်ကီထိုင် တရားဝင် YBOP ဆီသို့ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ရိုးရှင်းစွာထားပါ YBOP နှုတ်ပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေသူတွေကိုလည်းညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများကပေးဆောင်လျက်ရှိသည် ယင်း၏ / မိမိတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် porn နှင့် cam က်ဘ်ဆိုက်များမျှပြဿနာများ (မှတ်ချက်ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းသုံးစွဲသူများကအာမခံမှ: နီကိုးလ် Prause အဖြစ် porn စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်နီးစပ်သောပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ် နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဒီစာမျက်နှာပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်).
Pornhub နှင့် David Ley
လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုငြင်းပယ်သောစာအုပ်နှစ်အုပ်ရောင်းချခြင်းမှလည်းအကျိုးရှိသည်။ သူတို့က "လိင်စွဲလမ်း၏သွန်သင်ချက်အမှား, "(2012) နှင့်"Dick များအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ Porn,"(2016) ။ porn giant MindGeek မှပိုင်ဆိုင်သော Pornhub သည် Ley's 2016 စာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားသောကျောထောက်နောက်ခံပြုထောက်ခံချက်ငါးခုအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အပေါ်ကဟာအစွန်အဖျားပဲ ချီးမွမ်းခြင်းနှင့် Ley ရေခဲတောင်။ တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်များ Nicole Prause ကိုကျူးလွန်သူမဟုတ်ဘဲပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်အပြည့်အဝဖော်ထုတ်ခဲ့သည်.
လိင်စွဲမှုသည်စစ်မှန်သောလူများလိုအပ်သည်။ ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုသည်မျက်နှာပြင်နှင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သည်။ ငါတို့တွေ့တဲ့လူအများစုကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမဆက်သွယ်မီကြာမြင့်စွာကပင်အင်တာနက်ပေါ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်သူတို့၏ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကလစ်နှိပ်ခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ ဒါကသူတို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးအနမ်းမတိုင်မီရှည်လျားဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီဟာ Tiger Woods စွဲစွဲလမ်းနေတာလား။ နံပါတ်
ထို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ငြင်းခုံမှုမျိုးမဆိုလိင်စွဲလမ်းမှုအကြောင်းဖော်ပြခြင်းကိုလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်သင့်သည်။ “ သာမန်အမျိုးသားများ၏အပြုအမူ” ကိုရောဂါဖြစ်ပွားစေသောအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မဖြစ်သင့်ပါ။ ဘယ်တော့ သာမန် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုမျက်နှာပြင်မှာစိုက်ကြည့်သို့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲ? မြင်ကွင်းတစ်ခုပြီးနောက်မြင်ကွင်းတစ်ခုကို ဖြတ်၍ အပြီးသတ်ရန်“ တစ်ခု” ကိုရှာဖွေသောအခါမည်သည့်အချိန်တွင်သင်၏လွှမ်းမိုးမှုမရှိသောလက်ဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်လာသနည်း။ ၂၀၁၅ မှာပေးတဲ့ဟောပြောချက်ကိုကြည့်ပါ လိင်ကျန်းမာရေးတိုးဘို့လူ့အဖွဲ့အစည်း (ခါးပန်း) နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံ: porn စွဲလိင်စွဲလမ်းမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီစွဲလမ်းတစ်အခန်းကဏ္ဍ masturbation နိုင်သလား?
ဟုတ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမလိုအပ်ပါ။ သူကပြောပါတယ်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက်မကြာခဏသုက်လွှတ်မှဦးဆောင် အတော်ကြာဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ ကြောင်း dopamine, ဤသို့လိင်စိတ်တားစီး, ရက်ပေါင်းများစွာ။ သာမန်အခြေအနေများတွင်လိင်စိတ်နိုးထမှု (မျိုးစိတ်တစ်ခုစီအတွက်ကွဲပြားခြားနားစွာသတ်မှတ်ထားခြင်း) သည်ယောက်ျားများအားလိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းမှအချိန်ကြာမြင့်စွာယူဆောင်စေသည်။ လိင်အရရောင့်ရဲသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်ပိုမိုထိရောက်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသို့ကူးပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက်အချိန်ပိုဖြုန်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းတားဆီးပိတ်ပင်မှုများကိုကျော်လွှားနိုင်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးငန်း dopamine ။ လွန်ခဲ့သော“ ငါပြီးပြီ” အချက်ပြမှုများကိုတွန်းပို့ခြင်းသည် DeltaFosB စုဆောင်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အကယ်စင်စစ်အဝလွန်ခြင်းကိုစားခြင်းသည် DeltaFosB ကိုစုဆောင်းစေသည်။ ဒါပေမယ့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုမပါဘဲယောက်ျားဘယ်နှစ်ယောက်အနားယူရမလဲ။ အားလုံးအများစု။ ပိုမိုသိလိုပါက၊ မကြာခဏသုက်တစ်ဦးက Hangover စေပါသလား?
မှတ်ချက်။ ။ ငါစွဲနေသည့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု (ဖြစ်တည်မှုသို့မဟုတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ) နှင့် ပတ်သက်၍ ငြင်းခုံမှုများစွာရှိသည် တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးငြင်းခုံ။ ဤသည်တန်ရာသည်နှင့်လုံးဝဆွေးနွေးမှု muddies ။ YBOP အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်း, မအပြစ်တွေ, cons, ဒါမှမဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ကြိမ်နှုန်းတွေနဲ့သာအဓိကသက်ဆိုင်ပါတယ်။
အတော်များများကလက္ခဏာတွေ, တဦးတည်းအကြောင်းမရှိ: Neuroplastic ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ
2016 ၏အဖြစ်, စစ်တမ်းကောက်ယူ porn သုံးစွဲသူလေးပုံတပုံထက်ပိုပြီးပြဿနာ porn အသုံးပြုမှုဆိုင်းဘုတ်များဖေါ်ပြခြင်းနေကြသည်။ တွင် တဦးတည်းလေ့လာမှု, (27.6%) ပြဿနာအဖြစ် OSAs ၏ကြီးမားသောပြင်သစ်စကားပြောနမူနာ Self-အကဲဖြတ်သူတို့ရဲ့စားသုံးမှု၏။ တစ်ဦးအတွက် ယေးလ်လေ့လာမှု လွန်ခဲ့သော ၆ လအတွင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြသည့်အမျိုးသား ၁၂၉၈ ဦး တွင် ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းသည် hypersexuality disorder ၏ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုခံရသည်။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညစ်ညမ်းတဲ့သုံးစွဲသူများမှာအက်ကြောင်းတွေပေါ်လာသည်။ သို့သော်လူတို့သည်ဤရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အတူရောက်လာကြသည်။ သူတို့အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူး သခြော ရောဂါလက္ခဏာများသည်အလွန်ပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြောင့်ဖြစ်သည်။
porn Morphing ကြောင်းအရသာ လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုနှင့်မကိုက်ညီပါ (စထွက်လာပါတယ် HOCD)
ဤလက္ခဏာများသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများမှမကြာခဏပေါ်ပေါက်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ရန်အကြောင်းကောင်းရှိသည်။ ဆုလာဘ်စနစ်တွင်စိတ်ခံစားမှုများ၊ စိတ်နေသဘောထားများနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုလွှမ်းမိုးသည့်တည်ဆောက်ပုံများပါရှိသည်။ ၎င်းတွင်စိတ်ဖိစီးမှုတုန့်ပြန်မှု၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအာရုံကြောစနစ်နှင့် endocrine စနစ်များအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံများရှိသည်။ ဥပမာအထက်ပါတိုင်တန်းမှုများသည်ဥပမာ - လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်, စိတ်ကျရောဂါ, အနိမ့်လှုံ့ဆျောမှု, EDနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာများရှိသည် အနိမ့် dopamine နဲ့အနိမ့်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲ D2 receptors ချိတ်ဆက်ခဲ့။ ဟောင်း porn အသုံးပြုသူများကိုတွေ့ကြုံခံစားစှာအကြိုးခံစားခှငျ့မြား၏ neurobiology အဘို့အတွေ့ porn, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့် Mojo: တစ်ဦးကအာရုံကြောသိပ္ပံအမြင်.
နာတာရှည် porn အသုံးပြုမှုကိုအခြေခံလျှင် သင့်ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကသင်သည်ရန်လိုအပ်ပါတယ် သင်တို့၏အကျိုးဆားကစ်၏ sensitivity ကို restore။ မင်းလုပ်ဖို့လိုတယ်sensitised စွဲလမ်းကြောင်း eaken, နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုအားကောင်းလာစေရန်။ porn-ပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များအပေါ်အမျိုးသားများအတွက်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပဌနာ "ကို restart။ " reboot လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအားလုံးပြင်းထန်သောမှသင်၏ဦးနှောက်တစ်ကြွင်းသောအရာပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် အတုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွ-including porn, porn နှင့် ပတ်သက်. ကူးယဉျ, chat ခန်း, ခေါ်ဆောင်သွားပုံပြင်များ, ကနောက်ကျောမှလျော့နည်းခဲ့ချိန်အထိဓါတ်ပုံတွေကို-များအတွက် surfing ပုံမှန်တုန့်ပြန်.
ညစ်ညမ်းမှုကိုစွဲလမ်းသူများသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအကြီးအကျယ်လျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့ပြုလုပ်သောအခါ rebooting လုပ်ငန်းစဉ်သည်ပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ကိုရှောင်ခြင်းသည်ဤပုံစံသည်လူနေမှုပုံစံမဟုတ်ပါ; အဲဒါပဲ ယာယီ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေပြီးညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချရန်နည်းလမ်း။ သိသာထင်ရှားတဲ့, ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကန ဦး ဖြစ်ပါတယ် အလွန်ခက်ခဲ။ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် dopamine (နှင့်အခြားအာရုံကြောဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ) ၏ပြုလုပ်ထားသောပြင်းထန်သော“ ပြင်ဆင်ခြင်း” ကိုအားမကိုးနိုင်တော့ပါ။
desensitization အပြင်, porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သင့်ဦးနှောက်ကိုအပေါငျးအသငျးမြား porn နှင့်အတူမည်သည့်ခလုတ်နှင့်အတူအင်တာနက်ညစ်ညမ်းများ၏ရေတိုရေရှည်ကယ်ဆယ်ရေးချိတ်ဆက်အာရုံကြောဆက်သွယ်မှုကိုခိုင်မာစောင်း) ။ ထိုကဲ့သို့သောတစ်ဦးတည်းအိမ်ကဖြစ်ခြင်းအဖြစ်အစပျိုးခြင်း, sexy ပုံများ, သို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောက, လို့ရပါတယ် သင့် ဦး နှောက်၏ညစ်ညမ်းသောအာဟာရကိုသက်ဝင်စေပါ။ ဤအမသိစိတ်တစ်ပိုင်းလင့်များအားနည်းစေဖို့အတွက်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း (အားဖြည့်) ကို အသုံးပြု. ရပ်တန့်ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဦးနှောက်လမ်းကြောင်းများနှင့် သင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဆေးဝါးတခြားနေရာကိုရှာခြင်း။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းသောစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းများကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်“ ၀ ိုင်ယာကြိုး” ကိုဖြစ်စေသည် နောက်ဆုံးအားနည်း ထိခိုက်လမ်းကြောင်းများနှင့်မတရားသော၏။
rewiring လုပ်ငန်းစဉ်၏နောက်တစ်ဝက်သည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်အချိန်ဖြုန်းခြင်းပါ ၀ င်သည်။ ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာဆက်ဆံခြင်းသည်မိတ်ဖက်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်ကောင်းပြီးသင်နှင့်အမှန်တကယ်ရှိသူများကိုနှိုးဆွမှုကိုကူညီပေးနိုင်သည်။ ဘယ်အချိန်မှာလိင်ဆက်ဆံရမလဲ။ အချိန်ကုန်လွန်ပြီးနောက် (တစ် ဦး ချင်းအခြေအနေအပေါ် မူတည်၍ သက်တမ်းကွာခြားမှုရှိသည်) ပြီးနောက်အချို့သောယောက်ျားများကသူတို့နှင့် (သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ) သည်သန္ဓေတည်ခြင်းကိုမလုပ်မချင်းစစ်မှန်သောမိတ်ဖက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းသည်အထူးသဖြင့်အထောက်အကူဖြစ်သည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။ သဘာဝကျကျဖြစ်ပျက်
ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်သင်၏ prefrontal cortex (သင်၏နဖူးနောက်ကွယ်မှ) တွင်တည်ရှိသည့်သင်၏အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုကိုပိုမိုအားကောင်းစေသည်။ အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်း၊ တာဝေးပစ်အစီအစဉ်များချမှတ်ခြင်းနှင့်တွန်းအားများကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည် frontal cortex ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်။ ဝေါဟာရ hypofrontality ဘယ်လိုဖော်ပြသည့်အခါမကြာခဏအသုံးပြုသည် စွဲလမ်းမှုကိုအားနည်းစေခြင်းနှင့်တားစီး ဤအ Self-ထိန်းချုပ်မှုဆားကစ်။ ဒါဟာအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်ဤဆားကစ်ပြန်သွားအချိန်နှင့်ကိုက်ညီမှုကြာပါသည်။
သတိရပါ - သင်၏လွတ်လပ်မှုသည်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ဟန်ချက်ညီစေသည်။ ထိုအခါသင်သည်သင်၏ porn-နှိုးဆော်ခြင်းလမ်းကြောင်းသို့မဟုတ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောရလဒ်များကိုရရှိသောအချို့လမ်းကြောင်းကို activate လိမ့်မယ်ရှိမရှိရွေးချယ်နိုင်သည်။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး၊ reboot လုပ်တာကအနာဂတ်မှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာသုံးနိုင်မယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ လူ့ ဦး နှောက်သည်ပြင်းထန်သောလှုံ့ဆော်မှုများလွန်းသောအောက်ဘက်သို့လွင့်မျောနေနိုင်သည်။ သင့် ဦး နှောက်တွင်အပြုသဘောဆောင်သောညစ်ညမ်းသောလမ်းကြောင်းရှိသည်၊ ၎င်းကိုအမြဲပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်သည်။
အတော်များများက porn သုံးပြီးရပ်တန့်ခဲ့ကြပြီး သူတို့ဘဝပြန်လည်ကောင်းမွန်။ ဒါကြောင့်သင်လုပ်နိုင်သည်။
မူးယစ်အပြုအမူ: Dopamine ၏ 300 လိင်အင်္ဂါ = တစ်လောကျနော်တို့ကိုအလွယ်တကူသဘာဝကဆုလာဘ်များ supernormal ဗားရှင်းအားဖြင့်ချိတ်ဆက်နေကြသည်
porn, အသစ်အဆန်းများနှင့် Coolidge Effect: အ Coolidge Effect မရှိရင်မျှအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရှိပါလိမ့်မယ်
porn ထိုအခါနှင့်အခုဆိုရင်: ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေးမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်-“ ငါတို့ဘယ်သန်တွေကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့ပထမဆုံးမျိုးဆက်လား” \_ t
အဘယ်ကြောင့်နေရမည်မဟုတ်ဂျော်နီစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Porn သူ Likes အကယ်. ?: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေးကိစ္စရပ်များအထူးသဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း
အဘယ်ကြောင့်ငါတစ်ဦးကအဖော်သန်း Porn ပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကိုရှာပါသလား?: အာရုံကြောသိပ္ပံဘယ်လိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း Trump ကိုမှန်ကန်လိင်လုပ်နိုင်မှထုတ်ဖော်ပြသ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြိုက်ကိုဘောင်ခတ်ပြီးမပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများဖြစ်ကြသည် ?: 'လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုကို' ပြောင်းပြန် 'လိင်အရသာ' နှင့်ခွဲခြားရန်အချိန်တန်ပြီ
မကြာသေးမှီကအင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှုဦးနှောက်လေ့လာရေး Porn Include: တစ်ဦးတည်းသာဦးတည်ချက်အတွက်အင်တာနက်စွဲမှတ်အပေါ်ဦးနှောက်သုတေသန
porn, Pseudoscience နှင့် DeltaFosB (2013): သင် porn စွဲအကြောင်းကိုထိုအ5အကျွမ်းတဝင်ဒဏ္ဍာရီကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသလား?
အဆိုပါအခြား Porn စမ်းသပ်မှု: ကယခင် porn အသုံးပြုသူအလွတ်သဘောထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများကိုအဘယျသို့တငျပွနိုငျသနညျး
porn, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့် Mojo: တစ်ဦးကအာရုံကြောသိပ္ပံအမြင်: ထွ-porn အသုံးပြုသူများသည်များသောအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ Mojo ပြန်ရ။ အဘယ်ကြောင့်?
Young က Porn အသုံးပြုသူများသူတို့ရဲ့ Mojo Recover ရန်ရှည်လျားတဲ့လိုအပ်: ဆယ်ကျော်သက်လိင် rewiring မြန်နှုန်းမြင့် porn အသုံးပြုမှုကိုလား?
Porn စွဲသည်လိင်စွဲလမ်းမှုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသည်
သင့်ရဲ့ဖတ်စာအုပ်များဆမ်း: Docs လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစွဲကြမယ်,အမေရိကန်ဆေးစွဲမှုဆေးအဖွဲ့ကသူတို့၏လှုပ်လှုပ်ရွရွထုတ်လွှင့်မှုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် စွဲလမ်းအသစ်များနှင့်အဓိပ္ပါယ် နှင့်မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများရဲ့။